Expatriates Dubai - ကျနော်တို့အခုယူအေအီးမှာနေတယ်
ဒူဘိုင်းပွငျအလုပ်မလုပ် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ အသစ်ကယောဘကိုရှာဖွေသူများအာရုံစူးစိုက်မှု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေအကူအညီပေးနေကြသည်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းထားခံရဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်ကိုရှာဖွေသင့်ကိုကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်ကူညီခြင်း။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းရေးအဖွဲ့သည်ယူအေအီးရှိအလုပ်နေရာများစွာအတွက်ငှားရမ်းသည်။ ဒူဘိုင်းတွင်နိုင်ငံခြားတွင်အလုပ်လုပ်သည်ဒါကလူတိုင်းလိုချင်တာပဲ ဤနေရာတွင်သင်ကဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်ကူညီပေးဖို့။ တိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကျိန်းသေဒူဘိုင်းအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေကူညီဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ပေးထားပါတယ်။ သို့သော်ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုပင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်ပြောင်းရွှေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့လမ်းညွှန်။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရရန်လက်ပေါ်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကိုအများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်နေသောခြွင်းချက်လူတွေကိုရှာဖွေနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်အတောက်ပပါရမီနှင့်စိတ်အားထက်သန်တစ်ဦးချင်းစီအတှကျမြျှောအပေါ်အမြဲရှိပါတယ်။ သငျသညျ Are ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အများအပြားရာထူးများအတွက်ငှားရမ်းထားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသင်တို့အဘို့အဖွင့်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဖြစ်ကြပြီးသရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ်။ ကျနော်တို့ကိုဦးဆောင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အ site ကို။ ကျနော်တို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူရှာကြ၏။ အတှေ့အကွုံမပါဘဲပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်စေရန်။ ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။
ယူအေအီးအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ
ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအသစ်အလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်နေရာကိုချစ်!
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကွံဉာဏျပေးစွမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေနေအစီအစဉ်များနှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်နည်းလမ်းများ။ ယူအေအီးအတွက်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်နည်းလမ်းသစ်ဖြစ်လာသည်။ သငျသညျပြည်ပမှာအနေဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာတွေ့မှမျှော်လင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်တို့အဘို့ကျိန်းသေပါပဲ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, စော်ဘွားကုမ္ပဏီများသည်လူအပေါင်းတို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်ငှားရမ်း။ ငါတို့သည်တစ်ဦးအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ပေးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ဒူဘိုင်းအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ။ သငျသညျကိုမကျင့်လျှင်ကိစ္စအဖြစ်တကယ်တော့ hဟိုတယ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေရေးကိုရှာဖွေ ow စီမံခန့်ခွဲမှုယူအေအီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင် 60 ရက်အတွင်းအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဤစကားမှန်ကိုအပ်လုဒ်တင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့။ တစ်ဦးပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှအရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်ရှင်များများအတွက်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင်ရလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းပွငျအလုပ်မလုပ် - ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ငှားရမ်းကြသည်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Share ပေးပါ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက် အခြားသူများကိုကူညီပေးဖို့,
ကျနော်တို့အဘို့သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည် ဒူဘိုင်းပွငျအလုပ်မလုပ်။ ကျနော်တို့လို ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်သင့်ကိုကူညီကိုချစ်။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်အိပ်မက်မက်ပေးရအခြားကုမ္ပဏီများအတင်းလို့မရပါဘူး။ သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကျိန်းသေသင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒူဘိုင်းကိုချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအထူးကုဒီနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် သငျသညျအိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူလျှင်. ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက သင့်ကိုငှားရမ်းရန်မျှော်လင့်နေမည်။
သငျသညျကူညီပေးနေ၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်မယ်လို့ဆိုပါကရှာဖွေစုဆောင်းသငျသညျကိုငှားရမ်းပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငှားရမ်းအဖွဲ့သေချာသည်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီပဲသငျသညျယောက်ျားတွေစုဆောင်းရကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရှာတွေ့ဤမျှလောက်များစွာသောအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ ပွငျအလုပ်အကိုင်ဒူဘိုင်း။ အထူးသဖြင့်သင်ကတောင်အာဖရိကမှလျှင်။ ပင် ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများ.
60 ရက်ပေါင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ဒူဘိုင်းပွငျအလုပ်မလုပ် - ဤကြှနျုပျတို့လိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်း၌သင်တို့ကိုအလုပ်နေရာလွတ်ပေး။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေဝန်ဆောင်မှုရှည်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ် - ဟုတ်ကဲ့သင် LinkedIn အပေါ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်စစ်မှန်တဲ့နှင့်အခြားဖြစ်ပါသည် အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များ။ ပိုပြီး HR မန်နေဂျာများနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ LinkedIn တို့သွားပြီးဖိုင်နဲ့ထပ်ခါထပ်ခါအပ်လုဒ်ကိုဆက်သွယ်မှုစမ်းပါ။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းသူအပေါင်းတို့ကိုရောက်ရှိတဲ့အထိပါပဲ။ ဤသူကားအ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးအတွက်ယခုများအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သငျသညျ Are ဒူဘိုင်းမှာအလုပ်ရှာနေ? ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်သင်အလုပ်မြန်မြန်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအဖွဲ့သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည် တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်ကူညီရှာဖွေ ငါတို့အဘူဒါဘီအတွက်အဖြစ် ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးဖြစ်၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစော်ဘွားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အတှေ့အပြုသဘောဘက်တွင်လွယ်ကူသည်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့အောက်ကပုံပေါ်တွင်နှိပ်ပါနှင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
စော်ဘွားအတွက်ဂျော့ - သင်စော်ဘွားအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ သငျသညျ Are ဒူဘိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ? ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်း၌ရှိသောကျွမ်းကျင်သူများသူတို့ဆင်းသက်သည့်အခါတစ်နေ့တာတဦးတည်းကတည်းကအံ့သြဖွယ်နေရာလွတ်ရှာဖွေနေသည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်းကုမ္ပဏီများတစ်ခုမှာစော်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာပင်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါသည်သင်တန်း၏, သင်က pop နိုင်ပြီး ယူအေအီးအတွက်သူတို့နှင့်အတူအလုပ်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ.
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေကြသည် ?. ပစ္စုပ္ပန်ထိုအချိန်တွင်သင်သည် Starbucks ကကော်ဖီထဲမှာအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့တောင်မှအပေါ်ကိုကူညီကိုချစ်ကြသည် စော်ဘွားက်ဘ်ဆိုက်များ ပင်လယ်ကွေ့တွင်။ သငျသညျစော်ဘွားကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်မလုပ်လိုမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်ရှာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသစ်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေ ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့ join ဖို့။ စော်ဘွားဂျော့ဘ်များအတွက်နေရာချထားကျွန်တော်တို့ရဲ့ Arabic အဘိဓါန်သွေးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်အကိုင်ရှာမနေပါနဲ့။ သငျသညျပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်သင်သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ယခုပွငျအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ယူအေအီးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လို။ ငါတို့သည်သင်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်ကနေအသစ်အကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေသည်။
သငျသညျကို BP မှာအလုပ်လုပ်လိုပါသလား ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ် site ကို update လုပ်ပေးခြင်းနေကြသည်။ ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည် အသစ်သောကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမတို့အဘို့နှင့်ပြည်ပမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်။ ထောက်ပြဖို့ကျနော်တို့အတူတကွဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန်ရှာဖွေနေကြသူအိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်နှင့်အတူတောင်အာဖရိကရှာကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, လူတိုင်းကဗြိတိသျှရေနံအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကို CV ကိုပေးပို့ဖြစ်ပါတယ်။ Email လိပ်စာစာမျက်နှာ၏ထိပ်ပေါ်မှာထောက်ပံ့ပေးသည်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမတို့အဘို့ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စတခုကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အဘယ်အရာနိုင်ငံသား, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအလုပ်အကိုင်အရာပူဇော်သက္ကာကိုနေကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာကျွမ်းကျင်သူများမိန်းမတို့အဘို့ဖန်ဆင်းထားသည်။ ယခုအချိန်တွင်အမြိုးသမီးတမန်နေဂျာများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဦးတည်ရာမှာ။ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အသငျသညျအများအပြားရာထူးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတှေ့နိုငျဒူဘိုင်း၌ရှိကြ၏။ တစ်ဦးအိမ်ဖေါ်တက်အဖြစ်အခြေခံအလုပ် မှစ. အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိဟိုတယ်မန်နေဂျာနေရာလွတ်ဖြစ်သည်။
အလုပ်၏ခေတ်သစ်ရှာဖွေနေပြည်တွင်းပြည်ပဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ချိန်ရောက်လေပြီ။ သင်လုပ်နိုင်သည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိမိုဘိုင်းကျော်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့။ ယခုမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ, သင်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အလုပ်သစ်တွင်ကျယ်စွာကိုရှာဖွေရန်သင့် android ဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ တဦးတည်းကလစ်နှင့်အတူအားလုံးယူအေအီးကျော် CV ကိုရဲ့ပေးပို့ခြင်းစတင်ပါ။ ထို့အပွငျယခုသင်နိုင် ဒူဘိုင်း join။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများသည်။ အဆိုပါမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးကို tool ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခုဆိုရင်ပင် Google ကငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် မိုဘိုင်းဖုန်း application များအတွက်။ သင်၏စိတ်တွင်ဤအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှု စျေးကွက်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်များစွာသောကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စကားပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်လည်းဝန်ဆောင်မှုများစွာကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသဒူဘိုင်းဘလော့ဂ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုများ join နှင့်သင့် updated CV ကို post ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျတခုမော်တော်ကားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေလျှင် ဒူဘိုင်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျနော်တို့ဒီစာမျက်နှာစေပြီ။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်မကြာခဏအလုပ်သစ်နေရာလွတ်ကို update နေကြသည်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများကသစ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့များမှာ အခုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Audi ကားများအတွက်စုဆောင်း.
အနှစ်သာရအတွက်, သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေအတွေ့အကြုံကိုသို့မဟုတ်ရှိပါက တောင်အာဖရိကသင်ကြိုဆိုထက်ပို။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန်ရှာနေကြသူ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခု updated ဖုံးစာတစ်စောင်ပေးပို့ပါ။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလတိုင်းပြည်ပရှိဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်နေကြဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပြီး ရှာဖွေ Apply ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ သငျသညျအစဉ်မပြတ် Automotive စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသလား ?. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှားရမ်းမန်နေဂျာမှကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပို့ပါ။ ကျနော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အမရရှိနိုင်မှာလည်းအနည်းငယ်ကတခြားအလုပ်နေရာလွတ်ရှိခြင်းနေကြသည်။
သငျသညျရေနံနှင့်အတူဒူဘိုင်းနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါကကဏ္ဍယူအေအီးအတွက်အဓိပ္ပါယ်ကြီးထွားလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်နေစတင်နိုင်ပါသည်။ ကာတာနိုင်ငံနှင့်အဘူဒါဘီရေနံကုမ္ပဏီများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းဘူဒါဘီအတွက်အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီများ၏. အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူကြိုက်အများဆုံးသောနေရာများမှ ကုမ္ပဏီများကလုပ်ကိုင်ဖို့ကိုရှာဖွေဆော်ဒီအာရေဗျဖြစ်ပါသည်။ ရုံဤအရပ်ဌာနမေတ္တာရှင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှပြည်ပရှိနှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။
နောက်ထပ်စမတ်စိတ်ကူး အလုပ်ရှာပေးဖို့ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာယူအေအီးအတွင်းမှအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုရှာဖွေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကုမ္ပဏီအများစု၏အဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်သင့်တယ်အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေနေသူ။ ယခုကြှနျုပျတို့ကာတာနိုင်ငံရေနံ, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီရေနံကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်ရရန်ကူညီနေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအလုပ်ရှင်များနှင့်အတူယနေ့သင် connect ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုလည်းယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်နှင့်အတူကူညီခြင်း။ သငျသညျဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအားဖြင့်ငှားရမ်းထားခံရဖို့ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဒီမှာပါ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီ join အခါရေရှည်မှာခုနှစ်, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်သစ်လွတ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်အများအပြားအလုပ်နေရာလွတ်ဘို့ငှားရမ်းထားပါသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဖိလစ်ပိုင်အဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ် ဒူဘိုင်းအတွက်သူတို့ကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်းထားပါသည်။
ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေပြောင်းရွှေ့လာတာပေါ့။ ယူအေအီးရှိကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းရေးကုမ္ပဏီသည်ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများကိုကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ကျိန်းသေ, သငျသညျကိုကူညီပါ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ ဖိလစ်ပိုင်အလုပ်သမားအဖြစ်စီးတီး။ အတိုချုပ်ပြောရရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအလုပ်ရှာသူတိုင်းမှာသူ့မှာဒူဘိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ ဥပမာ၊ ဒူဘိုင်းတွင်ဆရာမအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ငှားရမ်း။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကသစ်ကိုပြည်တော်ပြန်များအတွက်နေရာလွတ်တွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည် MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်။ ဒူဘိုင်း၌အလွန်အမင်းတန်ဖိုးရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအဆင့်မြင့်ပညာရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ ကိုကသူတို့ကိုနေရာဘို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
ဒူဘိုင်းကအကောင်းဆုံးကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အမြင့်မားသောလုပ်ခဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပို့နိုင်ပါသည်၏ CV ကိုစိုးရိမ်မနေပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျိန်းသေသင်သည်သင်၏ start ကူညီပေးပါမည် အလုပ်အကိုင်အစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာဖော်ပြရှာဖွေနေ။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဤအ 60 နေ့ရက်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့တကမ္ဘာလုံးယူအေအီး၌ထားခံရဖို့အကြိမ်ကြိမ်လူအမျိုးမျိုးကူညီပေးနေနေကြသည်။
ရေရှည်မှာတှငျကြှနျုပျတို့အဘို့အတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်ယူအေအီး၌သင်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေရေး။ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် 60 ရက်ပေါင်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ?. ငါတို့သည်သင်တို့အလုပ်ရှာဖွေဖို့လမ်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ငှားရမ်းမန်နေဂျာအားဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ အဖြစ်ကွန်နက်ရှင် updates များကိုအပြည့်အဝဖွင့်လာဘို့ပဲစောင့်ဆိုင်းမှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအလာ ဒူဘိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပြည်ပရှိအလုပ်သမား.
ကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများ scamming ကြသည်မဟုတ်သူကိုစျေးကွက်အတွက်သာကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့သာလူတွေကိုဒူဘိုင်းအတွက်အိပ်မက်အလုပ်ရရန်ကူညီချင်နေကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုကူညီမယ့်ကိစ္စပါ။ ကျနော်တို့ပြန်သင့်အကောင့်ရန်သင့်ပိုက်ဆံမပို့နေကြပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းပွငျအလုပျဒူဘိုင်းနှင့်တကွသင်ကူညီပေးသည်။
တစ်ဦးကယောဘကိုကံကြမ္မာအမျှဒူဘိုင်း - သင်သိရန်လိုအပ်အားလုံး
ဒူဘိုင်း, အရွယ်အစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) ၏ဒုတိယပြည်နယ်, ဒူဘိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုတစ်အချက်အချာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏အဖြေတွေအများကြီးသူတို့သည်ကောင်းသောအလစာ-အကြေး, ကြီးသောအလုပ်ယဉ်ကျေးမှု, ဇိမ်ခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့, အခွန်လွတ်ဝင်ငွေနှင့်၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းအပါအဝင်ဤနေရာတွင်ပေးသော်လည်းနိုင်သည်ကိုအဓိကအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများများအတွက်ဧရိယာ၌အလုပ်အကိုင်များရှာအိပ်မက်မက်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့မြင့်မားတဲ့တိုးတက်သောနှုန်းထားများလူသိများအရှိဆုံးလစ်ဘရယ်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမဆိုအခြားတပါးအမြိုးသားနဲ့မတူပဲ, ဒူဘိုင်း၏မင်းသားပြည်နယ်အတွင်းရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ဘို့သူကတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီကတဦးကို ဤဒေသတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှု.
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတပါးအမြိုးသားအများစုဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အဓိကမူဘောင်အဖြစ်ရေနံအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာမှီခို။ သို့သော်ဒူဘိုင်းများအတွက်အမှုအရာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အခြားတစ်ဦးကအများကြီး စက်မှုလုပ်ငန်းလက်ရှိတွင်ဒူဘိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း, ကြီးထွားလာကဏ္ဍများတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်အာရှများစွာသောအခြားအစိတ်အပိုင်းများကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်ဆွဲဆောင်။ လက်ရှိတွင်ဒူဘိုင်းတွင်အောင်မြင်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထက်အခြားအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားအခြားသူတွေအကြားခရီးသွားလုပ်ငန်း, ဆောက်လုပ်ရေး, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အိမ်ခြံမြေများပါဝင်သည်။
အခွန်လွတ်ဝင်ငွေ၏မြင့်လစာနှင့်အဆောက်အဦဒူဘိုင်းထိပ်များထဲမှအောင် အလုပ်လုပ်ဘို့အအောင်မြင်ဆုံးခရီးစဉ်တစ်ဦးအဖြစ်ဒူဘိုင်းရွေးချယ်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ရွေးချယ်မှု။ သစ္စာဝါဒီဖြစ်စေရန်, ဒူဘိုင်းယူအေအီးအပေါငျးတို့သညျအခွားအစိတ်အပိုင်းများကြားတွင်အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လစာအင်ဂျင်နီယာ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာယေဘုယျမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်မန်နေဂျာတစ်ဦးတစ်လတစ်နေရာရာမှာ AED 75,000 န်းကျင်အထိနိုင်ပါတယ်။ လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာ AED 80,000 န်းကျင်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်တဲ့အိတ်၌တစ်ဦးကအကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး။ ဒါပေမယ့်မန်နေဂျာနှင့်အင်ဂျင်နီယာများများအတွက်လုပ်ခများအတွက်စတင်အကွာအဝေးတစ်ဦးသည်လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆို AED 12,000 မှ AED 15,000 အကြားအထိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအရာအပေါ်အချက်များအများကြီးရှိပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏လစဉ်လစာတွေအပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးသူတွေကိုပါဝင်သည်:
ဝန်ဆောင်မှုအဘို့အမြင့်မားသောလျော်ကြေးငွေပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်အများစုဟာလည်းအများအပြားအခြားသူတွေအကြားနှစ်စဉ်ထိုကဲ့သို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းများ, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်တစ်လှည့်လည်လက်မှတ်အခမဲ့တည်းခိုနေထိုင်, ဥပဒေကြမ်းများအဖြစ်များစွာသောအခြားအခွင့်အရေးနှင့်အတူလိုက်ပါ။
လစာ packages များထိုဒေသတွင်အပေါငျးတို့သအလုပ်အခွင့်အလမ်းများဘို့အတော်လေးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း, ကမကြာခဏအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်တကွကြွလာ။ လူနေမှုစရိတ်လည်းမြင့်မားသည်နှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူအကောင့်သို့ကြောင့်ယူအပ်သည်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပရိဘောဂ 9000 အိပ်ခန်းအိမ်သူအိမ်သားတက်ငှားရမ်းများအတွက်တစ်လလျှင် AED2န်းကျင်အထိယူလိမ့်မယ်။ နှုန်းထားများတစ် 7000 အိပ်ခန်းအိမ်တော်အဘို့ AED2န်းကျင်အထိအဖြစ်ကောင်းစွာ Unfurnished သူတို့အတှကျပင်မြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ shared တိုက်ခန်းများအများစုအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရဖို့ဖြစ်နိုင် AED 2000 န်းကျင်မှာမြို့အနှံ့ဖွင့်တည်ဆောက်။
ဓာတ်ဆီနှင့်ကားတစ်စီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများလျှော့စျေးနှုန်းများနှင့်အတူ ဒါကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ကားတစ်စီးဝယ်ယူတို့သည်ကြီးစွာသော option ဖြစ်တယ်။ သေးငယ်တဲ့ Hatchback ကား AED 1500 န်းကျင်တစ်ဦးသည်လစဉ်အခြေခံပ္ပံအပေါ်ကားတစ်စီးငှားရမ်း၏ထို option ။ တက္ကစီကီလိုမီတာနှုန်း AED2န်းကျင်ကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, တစ်ဦးချင်းစီတစ်ခုလုံးကိုခရီးစဉ်များအတွက်တူညီသောနှုန်းကိုလှည့်ပတ်မှာအကြမ်းအားဖြင့်မြို့လယ်ဘတ်စ်ကားပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအခြားဖြစ်ပါသည် အမြိုးသားအများအတွက်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးဆုံးအရာ။ တစ်ဦးချင်းစီအသီးအသီး AED စုပြုံဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသူတို့၏အလုပ်အကိုင်များမှာအချိန်အများစုကိုဖြုန်းမယ်လို့နေစဉ်, ပညာရေးများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကလေးများတက်ယူမယ်လို့မျှအများပြည်သူဆိုင်ရာကျောင်းတွင်လည်းမရှိ။ ဒါဟာပိုပြီးဒူဘိုင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က protocol ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါကပုဂ္ဂလိကနှင့်နိုင်ငံတကာကျောင်းများကျွမ်းကျင်သူများ၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်များ၏ပညာရေးအတွက်မှဖွင့်ရန်အဘို့အတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာစေသည်။ ဒါပေမယ့်ကျူရှင်အပေါ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခကြေးငွေအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများရပ်ကွက်များအတွက်ဧရိယာ၌ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကျောင်းများအတွက်တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ AED 90,000 န်းကျင်အထိအလွန်မြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
အခြားမည်သည့်မွတ်စ်လင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလိုပဲ, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ရက်သတ္တပတ်အများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကြာသပတေးနေ့မှတနင်္ဂနွေကနေကြာရှည်ခံသည်။ တချို့လက်လီဆိုင်များတွင်နှင့်အခြားအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်, ပြုပြင်တပတ်ကိုအခြားမွတ်စ်လင်နိုင်ငံကကဲ့သို့အပတ်စဉ်ချွတ်ဖြစ်ခြင်းစနေနေ့ကနေကြာသပတေးနေ့, သောကြာနေ့ (ထိုမွတ်စ်လင်၏အဘို့သန့်ရှင်းသောနေ့ရက်) မှကြာရှည်ခံသည်။ အဆိုပါအလုပ်ချိန်ကိုလည်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေစက်မှုလုပ်ငန်းမှကွဲပြားသိနေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီပုံမှန်အားဖြင့်သုံးနာရီချိုးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေ့လည် 8 AM မှနံနက်ယံ၌ 1 လေးကနေနေကြပါတယ်။ အလုပ်ထို့နောက်4pm တွင်ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နာရီအတွင်းတစ်ဦးလျော့ချရေးရှိပါသည်ယေဘုယျအား3pm တွင်ရန်7လေးတစ်နာရီအလုပ်လုပ်သူကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများများအတွက်အပြောင်းအလဲနောက်တဖန်ရှိပါသည်9pm တွင်မှီတိုင်အောင်အခြား6နာရီကိုဆက်လက်မယ်လို့ ဿွာန်။
စိတ်ဝင်စားအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုဖွင့်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်မျိုးစုံအွန်လိုင်းအလုပ် Portal နှင့်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများမှဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစမရရှိနိုင်နယ်ပယ်လွတ်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရန်ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ နောက်ထပ် option ကိုသူငယ်ချင်းအသိမိတ်ဆွေတွေဒါမှမဟုတ်တချို့ဆောင်ပေးသော်လည်းတစ်ဦးချမ်းအေးခေါ်ဆိုခကို အသုံးပြု. ရည်ညွှန်းရစေနိုင်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ယူအေအီးသွားရောက်, အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အလုပ်အကိုင်အမဲလိုက်သည်။ ယူအေအီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက်ထိပ်တန်းနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဒေသတွင်လည်း၎င်း၏တည်နေရာနှင့်ထိရောက်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်မှလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုအခြားဒေသများကဲ့သို့အလုပ်အကိုင်မြို့ပြရွှေ့ပြောင်းဖို့ကျေးလက်တစ်ဦးဦးဆောင်အကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏စစ်မှန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မယ့်အာမခံချက်မဟုတ်ပါဘူး.
အလုပ်အခွင့်အလမ်းများကွဲပြားခြားနားကြသည်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အရည်အချင်းများထက်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ သင်မည်သို့လျှောက်ထားရန်အခါသင်လျှောက်ထားတဲ့လျှောက်လွှာ, ဖြစ်စေလျက်, နှင့်မည်သို့အနေနဲ့အလုပ်ရှင်ချဉ်းကပ်ဖို့အောင်မြင်သောအလုပ်အမဲလိုက်ဆုံးဖြတ်ရန်သမျှသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။ တချို့လူတွေကသူတို့ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိရပါဘူးလို့အလုပ်အကိုင်ယူအေအီးနှင့်ရရှိနိုင်မှုအကြောင်းအပျက်သဘောအမြင်ရှိသည်။ တချို့ကအနိမ့်လစာနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အရယူပါ။
ယူအေအီးတစ်ဦးချုပ်ဦးတည်ရာဖြစ်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြောင့်ဒေသ၏အလားအလာတိုးတက်မှု၏ကသိသိသာသာတိုးတက်ဆိုတဲ့အချက်ကို; အလုပ်အကိုင်အများအတွက်မြောက်မြားစွာအခွင့်အလမ်းများရှိပါတယ်။ သို့သော်ဘာမျှမအာရေဗျနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့အကြောင်းကိုသိသာသည်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်အတွက်လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံကအဆငျ့များ၏တိကျသော type ကိုသိရန်ရှိသည်။ ဒါ့အပြင်သင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကုမ္ပဏီများကလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုစံအဆင့်ကိုသိရန်ရှိသည်။
သင်တန်း၏, သင်လိုအပ် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့။ ယူအေအီးမှာ, လိုအပ်သောထက်ပိုပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကျော်ကြားတဲ့ကုမ္ပဏီတခုနဲ့သင့်လျော်သောအလုပ်တစ်ခုချင်လျှင်, သင်လျော်သောကျွမ်းကျင်မှုလိုပါတယ်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့, အာရှန်ထမ်းအဆင့်မြင့်ဝယ်လိုအားအပေါ်ကြပြီ ဒေသတွင်းယခုအာရှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူရေလွှမ်းနေသည်အချိန်နှင့်အတူ, ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများများအတွက်ဝယ်လိုအားကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်၏ညှိနှိုင်းပါဝါမြင့်မားသည်, ဤအအာရဗီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ကော်ပိုရိတ်ကမ္ဘာ၏အရေးကြီးသောလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။
သုတေသနအလွန်အရေးပါသည်။ တကယ်တော့, သင်သည်သင်၏ applications များလုပ်သင့်တယ်နှင့်သင့်ရည်ရွယ်အလည်အပတ်ခရီးရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတစ်လပြင်ဆင်လော့။ တစ်ဦး 3-ရက်သတ္တပတ်စိစစ်ကာလရန်သင့်အားဖွယ်ရှိဘာသာရပ်ပါလိမ့်မယ်ဒေသတွင်း၌အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအခွအေနအဘို့ပြင်ဆင်ခံရဖို့ရှိသည်။ သင့်ရဲ့အိမ်စာကောင်းကောင်းလုပ်ပါ။
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်လျှောက်ထားသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်လိုမဟုတ်ဘူး။ ဒီမှာအလုပ်လျှောက်ထား၏နည်းလမ်းတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်း CV ကိုပေးပို့ခြင်းပင်အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကိုရန်သင့်အားအနီးကပ်မရစေခြင်းငှါ။ တကယ်တော့သင်ကကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့လျှောက်ထားပြီးအဖုံးစာတစ်စောင်ပါဝင်သည်ရန်သေချာစေပါသင့်တယ်။ သင်တစ်ဦး CV ကိုများနှင့်ဖုံးစာတစ်စောင်ပို့ခင်အခါတိုင်း, သင်စနစ်တကျတစ်ခုချင်းစီ CV ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။
အခြားအ CVs မတူဘဲ, သင်သည်သင်၏ဗီဇာအသေးစိတ်များကိုရန်လိုအပ်သည်။ စတင်ချိန်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။ လူမြိုးနိုင်ငံခြားပညာရှင်များအားဖြင့်အလုပ်ရှင်၏ဤအရပ်မှတစ်စိတ်အားထက်သန်မျက်စိကြီးစိုးနေသည် သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထိတွေ့ဆက်ဆံတစ်ဦးချင်းစီ၏စိစစ်အတည်ပြုဘို့ထိုကဲ့သို့အသေးစိတ်ကိုပေါ်မှာ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, သင်လျှောက်ထားတဲ့အလုပ်ကိုက်ညီသောကျွမ်းကျင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်ပါတယ်။ အပြင်, သင်သည်သင်၏ CV ကိုသို့မဟုတ်ဖုံးစာတစ်စောင်အပေါ်ကိုးကားထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့်ထားကြသည်, ကသငျသညျအလုပျလုံခြုံရေး၏ဤအရပ်မြင့်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတစ်အလုပ်ရှင်၏ယုံကြည်မှုတိုးပွါးလာ။ ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအဘို့, ကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့လယ်ပြင်၌ရရှိနိုင်သမျှသောအလုပ်အကိုင်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျစ်လျူရှုမရနိုင်ပါ။ အစာရှောင်ရာ-တိုးတက်နေသောစီးပွားရေးအဖြစ်ယူအေအီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းပညာ၏တစ်ဦးတော်လှန်ရေးခံခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းထိခိုက်ပေမယ့်လည်းကော်ပိုရိတ်ကမ္ဘာကြီးထားပြီးသာ။ အလုပ်ရှင်များကိုတဖြည်းဖြည်းအင်တာဗျူးများများအတွက်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းလက်ခံနေကြတယ်။ တကယ်တော့ကုမ္ပဏီများအများစု, အွန်လိုင်းပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ရန်သင့်အားလိုအပ်၏ CV ကို attach နှင့်ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်လျှောက်ထားစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သင်သည်သင်၏လူမှုမီဒီယာ profile များကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အတူစတင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်သင့်သည်, ပုံရိပ်နှင့်သင့်သမာဓိရှိအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်သောပို့စ်များကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ တစ်ခုကအလုပ်ရှင်အလွယ်တကူသင်နှင့်အတူယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာ profile များကိုအပေါ်ရေးသားချက်များ၏သဘောသဘာဝတစ်အနုတ်လက္ခဏာအမြင်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင်အလုပ်ရှင်များ LinkedIn ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာ profile များကိုတဆင့်ငှားရမ်း။ သငျသညျအလုပျရှငျလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်သငျ့သညျ။ သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုတွင်, ကျွမ်းကျင်မှုသင့်ရဲ့လယ်ကွင်းဆက်စပ်ကြောင်းတိကျတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေနဲ့ content တွေကိုစိတ်ကြိုက်။ အလုပ်ရှင်များကစုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်အချိန်ဖြုန်း တစ်ဦးချင်းစီရှာဖွေစုဆောင်း၏ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်စွမ်းရည်အကဲဖြတ်ဖို့။ သင့်ရဲ့ image ကိုအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောနိုင်သောမည်သည့်မလိုအပ်သောနှင့်ဖျော်ဖြေမှုပို့စ်များကိုဖယ်ရှားရမည်။
ယူအေအီးအများစုသည်ကုမ္ပဏီများသည်သက်ဆိုင်ရာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ အသေးစိတ်အများစုဟာမလိုအပ်သောနှင့်ငြီးငွေ့စရာပုံရသည်, ဤသငျသညျကိုချွတ်ယိမ်းမသွားပါစေပါဘူး။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်သူတို့သင်တို့ရှိသမျှအသေးစိတျပေးဖို့မြျှောလငျ့အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားခြားနားသောစုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်ပုံစံများကို update လုပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာကအသေးစိတ်အချို့သည်ပြန်လုပ်မှစိတျဆိုးရနိုင်ပေမယ့် သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်ရှိပါကသင်ကလုပ်ဖို့လိုအပ်.
သငျသညျယူအေအီးအတွက်ကောင်းသောအလုပ် secure ဤ4အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာအာမခံပါသည်။
အရွယ်အစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) ၏ဒုတိယပြည်နယ်, ဒူဘိုင်း, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုတစ်အချက်အချာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီ၏အဖြေတွေအများကြီးသူတို့သည်ကောင်းသောအလစာ-အကြေး, ကြီးသောအလုပ်ယဉ်ကျေးမှု, ဇိမ်ခံလူနေမှုပုံစံစတဲ့, အခွန်လွတ်ဝင်ငွေနှင့်၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းအပါအဝင်ဤနေရာတွင်ပေးသော်လည်းနိုင်သည်ကိုအဓိကအားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများများအတွက်ဧရိယာ၌အလုပ်အကိုင်များရှာအိပ်မက်မက်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့မြင့်မားတဲ့တိုးတက်သောနှုန်းထားများလူသိများအရှိဆုံးလစ်ဘရယ်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမဆိုအခြားတပါးအမြိုးသားနဲ့မတူပဲ, ဒူဘိုင်း၏မင်းသားပြည်နယ်အတွင်းရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်ဘို့သူကတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စေသည် ဤဒေသတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အထိပ်ရွေးချယ်မှုများထဲမှ.
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတပါးအမြိုးသားအများစုဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအတွက်အဓိကမူဘောင်အဖြစ်ရေနံအပေါ်တစ်ခုတည်းကိုသာမှီခို။ သို့သော်ဒူဘိုင်းများအတွက်အမှုအရာကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သည်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတစ်ဦးကအများကြီးလက်ရှိတွင်ဒူဘိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း, ပိုလန်ကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်ဆွဲဆောင်, အိန္ဒိယ, ပါကစ္စတန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်အာရှများစွာသောအခြားအစိတ်အပိုင်းများကြီးထွားလာကဏ္ဍများတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့။ လက်ရှိတွင်ဒူဘိုင်းတွင်အောင်မြင်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထက်အခြားအဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားအခြားသူတွေအကြားခရီးသွားလုပ်ငန်း, ဆောက်လုပ်ရေး, ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အိမ်ခြံမြေများပါဝင်သည်။
အခွန်လွတ်ဝင်ငွေ၏မြင့်လစာနှင့်အဆောက်အဦဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ဘို့အအောင်မြင်ဆုံးခရီးစဉ်တစ်ဦးအဖြစ်ဒူဘိုင်းရွေးချယ်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အထိပ်ရွေးချယ်မှုများထဲမှပါစေ။ သစ္စာဝါဒီဖြစ်စေရန်, ဒူဘိုင်းယူအေအီးအပေါငျးတို့သညျအခွားအစိတ်အပိုင်းများကြားတွင်အမြင့်ဆုံးပေးဆောင်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လစာအင်ဂျင်နီယာ, ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်လုပ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာယေဘုယျမန်နေဂျာသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်မန်နေဂျာတစ်ဦးတစ်လတစ်နေရာရာမှာ AED 75,000 န်းကျင်အထိနိုင်ပါတယ်။ လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာ AED 80,000 န်းကျင်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်နိုင်တဲ့အိတ်၌တစ်ဦးကအကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး။ ဒါပေမယ့်မန်နေဂျာနှင့်အင်ဂျင်နီယာများများအတွက်လုပ်ခများအတွက်စတင်အကွာအဝေးတစ်ဦးသည်လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆို AED 12,000 မှ AED 15,000 အကြားအထိနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ၏လစဉ်လစာအပေါ်သို့မှီခိုရသောအပေါ်အချက်များအများကြီးရှိပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးသူတွေကိုပါဝင်သည်:
လစာ packages များထိုဒေသတွင်အပေါငျးတို့သအလုပ်အခွင့်အလမ်းများဘို့အတော်လေးဆွဲဆောင်မှုဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း, ကမကြာခဏအပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်တကွကြွလာ။ လူနေမှုစရိတ်လည်းမြင့်မားသည် အလုပ်ရှာဖွေသူများအကောင့်သို့ကြောင့်ယူဘို့ကလိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာပရိဘောဂ 9000 အိပ်ခန်းအိမ်သူအိမ်သားတက်ငှားရမ်းများအတွက်တစ်လလျှင် AED2န်းကျင်အထိယူလိမ့်မယ်။ နှုန်းထားများတစ် 7000 အိပ်ခန်းအိမ်တော်အဘို့ AED2န်းကျင်အထိအဖြစ်ကောင်းစွာ Unfurnished သူတို့အတှကျပင်မြင့်မားသောဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ shared တိုက်ခန်းများအများစုအတွက်အခန်းတစ်ခန်းရဖို့ဖြစ်နိုင် AED 2000 န်းကျင်မှာမြို့အနှံ့ဖွင့်တည်ဆောက်။
ဓာတ်ဆီနှင့်ကားတစ်စီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများလျှော့စျေးနှုန်းများနှင့်အတူကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ကားကိုဝယ်ယူတဲ့အကြီးအ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့ Hatchback ကား AED 1500 န်းကျင်တစ်ဦးသည်လစဉ်အခြေခံပ္ပံအပေါ်ကားတစ်စီးငှားရမ်း၏ထို option ။ တက္ကစီကီလိုမီတာနှုန်း AED2န်းကျင်ကိုအားသွင်းနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, တစ်ဦးချင်းစီတစ်ခုလုံးကိုခရီးစဉ်များအတွက်တူညီသောနှုန်းကိုလှည့်ပတ်မှာအကြမ်းအားဖြင့်မြို့လယ်ဘတ်စ်ကားပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသားသမီးတို့အဘို့စဉ်းစားရန်အခြားအရေးကြီးသောအရာဖြစ်၏။ တစ်ဦးချင်းစီအသီးအသီး AED စုပြုံဖို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသူတို့၏အလုပ်အကိုင်များမှာအချိန်အများစုကိုဖြုန်းမယ်လို့နေစဉ်, ပညာရေးများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကလေးများတက်ယူမယ်လို့မျှအများပြည်သူဆိုင်ရာကျောင်းတွင်လည်းမရှိ။ ဒါဟာပိုပြီးဒူဘိုင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က protocol ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဒါကစေသည် ပုဂ္ဂလိကနှင့်နိုင်ငံတကာကျောင်းများကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာ ၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်များ၏ပညာရေးအတွက်မှဖွင့်ရန်။ ဒါပေမယ့်ကျူရှင်အပေါ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခကြေးငွေအထူးသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများရပ်ကွက်များအတွက်ဧရိယာ၌ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာကျောင်းများအတွက်တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ AED 90,000 န်းကျင်အထိအလွန်မြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
အခြားမည်သည့်မွတ်စ်လင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလိုပဲ, ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်အပတ်က အများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တနင်္ဂနွေကနေကြာသပတေးနေ့မှကြာရှည်ခံသည်။ တချို့လက်လီဆိုင်များတွင်နှင့်အခြားအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်, ပြုပြင်တပတ်ကိုအခြားမွတ်စ်လင်နိုင်ငံကအဖြစ်ကိုချွတ်အပတ်စဉ်ဖြစ်ခြင်းစနေနေ့ကနေကြာသပတေးနေ့, သောကြာနေ့ (ထိုမွတ်စ်လင်၏အဘို့သန့်ရှင်းသောနေ့ရက်) မှကြာရှည်ခံသည်။ အဆိုပါအလုပ်ချိန်ကိုလည်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေစက်မှုလုပ်ငန်းမှကွဲပြားသိနေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာရီပုံမှန်အားဖြင့်သုံးနာရီချိုးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နေ့လည် 8 AM မှနံနက်ယံ၌ 1 လေးကနေနေကြပါတယ်။ အလုပ်ထို့နောက်4pm တွင်ပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်လအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နာရီအတွင်းတစ်ဦးလျော့ချရေးရှိပါသည်ယေဘုယျအား3pm တွင်ရန်7လေးတစ်နာရီအလုပ်လုပ်သူကိုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများများအတွက်အပြောင်းအလဲနောက်တဖန်ရှိပါသည်9pm တွင်မှီတိုင်အောင်အခြား6နာရီကိုဆက်လက်မယ်လို့ ဿွာန်။
စိတ်ဝင်စားခဲ့သည် အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုဖွင့်အခွင့်အလမ်းများရှာဖွေရန်မျိုးစုံအွန်လိုင်းအလုပ် Portal နှင့်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများမှဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစမရရှိနိုင်နယ်ပယ်လွတ်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရန်ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ နောက်ထပ် option ကိုသူငယ်ချင်းအသိမိတ်ဆွေတွေဒါမှမဟုတ်တချို့ဆောင်ပေးသော်လည်းတစ်ဦးချမ်းအေးခေါ်ဆိုခကို အသုံးပြု. ရည်ညွှန်းရစေနိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းခုနှစ်တွင်ဂျော့ဘ် - အဘယျသို့ Choose နှင့်မည်သို့ Choose နည်း
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အသက်ရှင်ဒူဘိုင်း၏မင်းသားပြည်နယ်အတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီ၏တွေအများကြီးများအတွက်အိပ်မက်မက်။ သို့သော်ထိုသို့နေရာကိုမျှော်မှန်းသောအရာတို့ကိုယူအေအီးအတွက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်သင့်လျော်သောအသိပညာကင်းမဲ့လျှင်အဲဒီမှာအတွက်ကောင်းသောအလုပ်တက် secure ဖို့အတော်လေးခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးဆိုင်တဲ့အခြေအနေတွေ,f၏အခြေခံကိုယ်စားပြုမှုအတူတက်လာကြပြီဒါမှမဟုတ်ဒေသတွင်း၌အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်.
ဒူဘိုင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏7စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး) ၏အရေးအပါဆုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ စော်ဘွားတစ်ဦးလွတ်လပ်သောအုပ်စိုးသောမင်းကိုပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့ရဲ့တောင်ပိုင်းအတိုင်းအတာမှာတည်ရှိပါတယ်မင်းတို့ကိုဒေသထိန်းချုပ်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ကယူအေအီး၏ချမ်းသာကြွယ်ဝဒေသများမှကြွလာသောအခါ, ဒူဘိုင်းစာရင်းထဲတွင်ခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
ရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းယင်းဒေသ၏စီးပွားရေးကျောရိုးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်း၏အဓိကဥစ္စာဓနဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘာဝအဆီသည်၎င်း၏ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်များတစ်ခုတည်းကိုသာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကြီးမားသိုက်များ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်၌ပါသောဆီ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူတဦးသို့ဒူဘိုင်းလှည့်။ ကစော်ဘွားရဲ့စီးပွားရေးများအတွက်ကျောရိုးဖြစ်ပေါ်လာသောသော်လည်း, ဒူဘိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ၎င်း၏ကြီးထွားမှုအတွက်ကအပေါ်မှီခိုဘယ်တော့မှသိရသည်။ ဤအရပ်ဌာနကိုကမ္ဘာ၏အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာဒေသတစျခုပါစေသောအခြားစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းလက်ရှိတွင်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းအခြားကဏ္ဍများပါဝင်သည်:
အခွားသူမြားစှာအကြားသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (အိုင်တီ) ။
ဤအများစွာကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲကဏ္ဍများ၏စန်းနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းမရေမတွက်နိုင်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်အတိုင်းအတာယူဆောင်လာ။ ထို့ပြင်အမြင့်ဆုံးလစာနှုန်းထား, အဲဒီအကျိုးအမြတ်အလုပ်အကိုင်များနှစ်စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှမရေမတွက်နိုင်သောအလုပ်ရှာဖွေသူများဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ လက်ျာအရည်အချင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံအဆင့်နှင့်အတူ, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငြိမ်ဝပ်သောဤအလုပ်အကိုင်များပေးသော်လည်းနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်လည်းရဆုံးကိစ္စများတွင်စကားပြောအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။
ပညာရေး - ပညာပေးဌာနသင်ကြားမှုအလုပ်အကိုင်များ၏ရေတွက်ဖို့မြင့်တက်ပေးခြင်းသည်အခြားနေ့ရက်ကိုထူထောင်လျက်ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအလုပ်အကိုင်များအတွက်သက်ဆိုင်လိမ့်ဖို့အနည်းဆုံးဂုဏ်ထူးနှင့်အတူမည်သည့်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးဘွဲ့တစ်ခုရှိရမည်။ တစ်ဦးက B.Ed ဘွဲ့သင်တန်း၏မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ (မည်သည့်နေရာအရပ်၌) ပညာရေး၏ဌာနများတွင်သင်ကြားရေးတစ်ခုအတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအလုပ်အတွက်အိတ်ဖို့ပိုများပါတယ်။
IT - ဒူဘိုင်းက၎င်း၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမူဘောင်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကျော်ကြားသည်။ ဒါဟာဒေသတွင်း၌အခြေစိုက်စခန်းဖွင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကြည်ကြည်အိုင်တီကုမ္ပဏီတွေအများကြီးတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ကွန်ပျူတာ applications များ၏လယ်ပြင်တွင်တစ်ဦးလူပျိုကြီးရဲ့သို့မဟုတ်မာစတာဘွဲ့နှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရည်အချင်းပြည့်မီ ဂုဏ်သတင်းအိုင်တီကုမ္ပဏီများကအများစုအတွက်အိုင်တီအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားရန် IBM က, Oracle ကနှင့် Microsoft တို့အပါအဝင်ဒေသတွင်း၌။ တစ်ကြည်ကြည်ဌာနထံမှမဆိုသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်တစ်ဦးကဒီပလိုမာလက်မှတ်ထပ်မံရွေးချယ်ထားသည့်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။4+ နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပိုပြီးဦးစားပေးကြသည်။
လက်လီ - ဒူဘိုင်းမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဧရိယာ၌ကုန်တိုက်ကြီးတွေရဲ့အရေအတွက်အတွင်းမြင့်တက်လာဘို့, လူအပေါင်းတို့သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများတို့တွင်စျေးဝယ်မြို့တော်ဖြစ်လူသိများသည်။ လောလောဆယ် 70 မောလ်များနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောဌာနဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များ, စျေးဆိုင်များနှင့်ဒေသတွင်း၌ operating ဖက်ရှင်ဆိုင်များထက်ပိုရှိပါတယ်။ တစ်ကြည်ကြည်အဖွဲ့အစည်းကနေ MBA ဘွဲ့ဒီဂရီအခြေခံတစ်ခုဖြစ်တယ် လက်လီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းတစ်ဦးအလုပ် bagging အတွက်လိုအပ်ချက်များကို။ လက်လီစီမံခန့်ခွဲမှု၏သင်တန်းများအတွက်တစ်ဦးကဒီပလိုမာလက်မှတ်ထပ်မံရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေတိုးပွားစေပါသည်။
ဧညျ့ဝတျကပြွှေနျခွငျး - ဧညျ့စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဘွဲ့ကိုင်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအရည်အချင်းပြည့်မီ ဒီကဏ္ဍအတွက်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားရန်.
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာ အွန်လိုင်းအလုပ်တွင်ကျယ်စွာအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အလုပ်အကိုင်အဖို့ဆက်ကပ်အပ်နှံဤဆိုဒ်များအသုံးပြုသူများကနိုင်ငံတွေအပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေခွင့်ပြုထားသည်။ အသုံးပြုသူများသည်ဒူဘိုင်းသူတို့ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေကမ်းလှမ်းဘို့ကြည့်ဖို့သူတို့ကို browse နိုင်ပါတယ်။ Google က, သင်တန်း, ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အချိန်ကိုကယ်တင်ရန်နောက်ထပ်အလားအလာ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ရှာဖွေရေးစာရင်းတွင်တက် လာ. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည်နှင့် အဆိုပါမျိုးစုံအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုများအတွက်လျှောက်လွှာတင်သွင်း။ အလုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအများစုအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပူဇော်သော်လည်းတစ်ဦးအခပေးစာရင်းပေးသွင်းအတူပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အတူတက်လာရောက်ပူးပေါင်းကိုအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေတာ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဒါဟာအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုမကြာခဏမှဖွင့်နိုင်သည်ကိုအခြားနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်ထိရောက်သောအလုပ်အကိုင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများဖို့အကူအညီပူဇော်သောစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ set စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့အသေးစိတျနှငျ့အတူကုမ္ပဏီများသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် - ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်လက်မှတ်များ (ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်), သူတို့ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့အလားအလာနှုန်းအတိုင်းအကောင်းဆုံး suite အလုပ်တက်သည်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့သည်များစွာသောပူဇော် ထိုကဲ့သို့သော, ဒေသတွင်း၌တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. လမ်းညွှန်မှုကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းရေးသားခြင်းအပေါ်အကြံပေးချက်များအဖြစ်အခြားဝန်ဆောင်မှုများ, လစာဖွဲ့စည်းပုံ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းနှင့်များစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများအကြားတစ်ဦးနှစ်လိုဖွယ်ပရိုဖိုင်းကိုဖွင့် setting ။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့၏နှစ်စဉ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသူတို့ကိုကူညီနေတဲ့အတွက်သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းကောက်ခံ။
ထိပ်တန်းနည်းလမ်းများဒူဘိုင်းမှာလုံခြုံတဲ့ယောဘသည် Get ရန်
ဒူဘိုင်းဖြစ်ကောင်းအလွန်တစ်ခုဖြစ်သည် တစ်ဦးလည်ပတ်အလုပ်အကိုင်ဟန်ပြအရပ်၌အနည်းငယ်သောအရပ်တို့ကိုမကိုမြေကြီးပေါ်မှာ left။ အနည်းဆုံးကြောင့်အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးအဖြစ်တော့၏ခြိမ်းခြောက်မှုများစဉ်အတွင်းဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများအများဆုံးအနေဖြင့်မကြာခဏအလုပ်ဖြတ်တောက်မှု၏စံချိန်စံညွှန်းအပြီးအိန္ဒိယ, ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်အပါအဝင်ကမ္ဘာ၏များစွာသောအခြားအစိတ်အပိုင်းများနေထိုင်သူများမှခံစားရသည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ဘို့ပြောင်းလဲနေသောစိတ်အားထက်သန်အဓိကအားဖြင့်ဒူဘိုင်း, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာမင်းသားအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြည်နယ်အဘို့, ရှိနေပါသည်။ အရပျနေတဲ့အခွန်-ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားသောကွောငျ့ဤသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမန်နေဂျာအသက်လမ်း။ ဒူဘိုင်းကနေအလုပ်ရှင်နေဆဲမြောက်မြားစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မှ All-န်းကျင်အရည်အချင်းပြည့်သောလူများအတွက်မီးဖိုမျက်နှာစာများရှိသည်။
သို့သော်နေဆဲရှိကွောငျးအဓိကမေးခွန်းဖြစ်ပါသည် အလုပ်နှင့်သွားရကာအယ်လ်ဂျီးရီးယားအလုပ်သမားများကဲ့သို့ရှိအလုပ်လုပ်ရန်ဗီဇာရဖို့ဘယ်လောက်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကျနော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနိုငျသောအထင်ရှားဆုံးအကျင့်တို့နှင့်ထလာကြပြီကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးဆန္ဒရှိသောအရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းများအများစုဟာအထူးသဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအိန္ဒိယနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအဖြစ်တိုင်းဒေသကြီးများအနေဖြင့်နှစ်စဉ်မိုးသည်းထန်စွာ်ထမ်းခေါ်ယူမှုပါစေ။ အလုပ်အကိုင် Expo နှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာထိုကဲ့သို့သောအရပ်တွင်ကျင်းပကြသည်။ ဤသည်ကိုကမ်းလှမ်းလျက်ရှိသည်အဘယ်အရာကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုမျိုးကိုတက်စစျဆေးဖို့မဆိုသက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလားအလာရှာဖွေစုဆောင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်တဦးတည်းအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူတက်လာပါတယ်။ အဲဒီလစာ packages များနှင့်အခြားရရှိနိုင်သမျှအခွင့်အရေး သိ. ပါဝင်သည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ် နှင့်သူတို့မင်းသားပြည်နယ်အတွက်သွားနှင့်အလုပ်လုပ်ကူညီရန်ဗီဇာရရှိရန်နှင့်ပတ်သက်။ အသိပညာအချို့စုဆောင်းပါ။ ဤဖော်ပြချက်သည်လူအများအားလူနေမှုပုံစံအသစ်များကိုရှာဖွေပြီး၎င်းတို့ကိုတည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ၎င်းသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအား၎င်းတို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကဏ္sectorsမှအလုပ်ရှင်များနှင့်မျှဝေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါဟာဒူဘိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်နယ်ပယ်ပွင့်လင်းအခွင့်အလမ်းများဖွင့်ကြည့်ဖို့အခြားလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအခြေပြုအများကြီးရှိပါတယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်သင့်လျော်သောအလုပ်အခွင့်အလမ်းများပူဇော်ကြောင်းစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ တစ်ဦးသင့်လျော်သောပရိုဖိုင်းရှိခြင်း။ သူတို့က web မှတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနှင့်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါသည်။ အချို့သောအေဂျင်စီများကိုလည်းဒူဘိုင်းအခြေစိုက်အခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့ရာအရပ်ကို၏နေထိုင်သူများမှအလုပ်အကိုင်အအကူအညီများပေးအလုပ်လုပ်သောဤကဲ့သို့သောအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အဖြစ်နိုင်ငံအများမှာ set up နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားအေဂျင်စီများသူတို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားခြင်းနှင့်လက်ျာလမ်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုအပေါ်အကြံပေးချက်များအပါအဝင်အလုပ်ရှာဖွေသူများအားပူဇော်သည့်မျိုးစုံန်ဆောင်မှုများအတွက်အမည်ခံနှစ်စဉ်ကြေးကောက်ခံလိမ့်မည်။ သူတို့အားအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကောင်းစွာအများအပြားအွန်လိုင်းအလုပ်တွင်ကျယ်စွာရှိပါတယ်။ အချို့ တွင်ကျယ်စွာတစ်ခုတည်းကိုသာအရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အခြေစိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အပျနှံနေကြတယ် နှင့်အသုံးပြုသူများ destination သည်နိုင်ငံပေါင်းအပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်တစ်ခု option ကိုအတူပါလာ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအလုပ်ရှာဖွေသူများကိုအဝေးမှကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အခြားအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်မှတဆင့်အလုပ်ရှင်ဆက်သွယ်ပါရန်အဘို့အဒါဟာလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာသိပ်အတည်ပြုချက်ကိုဘဲအချိန်ကုန်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပေမယ့်အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီများနှင့်၎င်းတို့၏အမည်ခံစွဲချက်မှထပ်ခါတလဲလဲလာရောက်လည်ပတ်သူနာကျင်မှုထဲကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများကယ်တင်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်န်ဆောင်မှုစွဲချက်ယူပြီးရှိနေသော်လည်းမျှအမှန်တကယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးစေခြင်းငှါအခြို့သောအတုအေဂျင်စီများရှိပါသည်။ အဝေးမှအလုပ်ရှင်များပစ်မှတ်ထားထိုကဲ့သို့သောအေဂျင်စီများမှပြုတ်ကျလုယူရာဥစ္စာထဲကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းကာကွယ်ပေးသည်နှင့် တိုက်ရိုက်အဖွဲ့အစည်းကထောက်ပံ့စစ်မှန်သောအလုပ်အခွင့်အလမ်းများအတည်ပြု။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအထူးသဖြင့်ကဏ္ဍသက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်ရှာဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လက်ရှိရရှိနိုင်မဆို / အားလုံးပွင့်လင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရိုးရှင်းစွာမိမိတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူ website နှင့်အားလုံးအရည်အချင်းများ, ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကသူတို့ကိုအလုပ်များအတွက်သင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းစေသည်ဖော်ပြနေတဲ့အဖုံးအက္ခရာမှတဆင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ စုဆောင်းရေးစိတ်ဝင်စားလျှင်, သူတို့ကတိုက်ရိုက် middleman liabilities ကြဲခြင်း, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်လက်တွေ့အသံစခွေငျးငှါသော်လည်း, ကဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလိုက်ရှာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအားထုတ်မှုနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးဖွင့်ယူပေမယ့်အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းစခွေငျးငှါ ယူအေအီးအတွက်ညာဘက်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဖွင့်ကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအဖွဲ့အစည်းတက်သွားနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍရရှိနိုင်မဆိုဖွင့်လှစ်ခွင့်အလမ်းများအတွက်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းများ, ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများအားလုံးအသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူမိမိတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၏မိတ္တူသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအလုပ်လုပ်ကိုင်အချိန်ဇယားအဖွဲ့အစည်းကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအပေါ်အခြေခံပြီးအဖွဲ့အစည်းကွဲပြားလိမ့်မည်။ အချို့သောဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကများအကြားတစ်ဦး 8 နာရီချိုးနှင့်အတူ7pm တွင်ရန်3လေးတစ်နာရီအလုပ်လုပ်နေစဉ်, ပြည်တွင်းရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ9pm တွင်နာရီမှတစ်ဦး6လေးပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သောကြာနေ့အလုံးစုံတို့အဘို့တရားဝင်နင်္ဂနွေဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအချို့သောကဏ္ဍများတွင်အဖြစ်ကောင်းစွာကြာသပတေးနေ့မှတနင်္ဂနွေ၏အပတ်စဉ်သံသရာအပေါ်အလုပ်မလုပ်။
ဒူဘိုင်း, ကမ်ဘာပျေါမှာဦးဆောင်ရေနံထုတ်လုပ်သူများထဲကတစ်ခုကိုလည်းတစျဦးဖွစျသညျ လေဆိပ်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ဦးဆောင်အလုပ်ပံ့ပိုးပေး။ ဤမျှလောက်များစွာသောအချက်တွေအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအလုပ်ရှာဖွေသူအနေဖြင့်ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုများထဲမှဖြစ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မင်းသားပြည်နယ်စေရန်အတူတကွတက်ထည့်ပါ။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အောက်တွင်များစွာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများများအတွက်အိပ်မက်အလုပ် destination သည်သို့ဒူဘိုင်းလှည့်ဘူးသောအဓိကအချက်များ၏တချို့ရှိနေပါတယ်။
ထိုသို့အရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမကြာခဏလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုမေ့လျော့၏အဓိကအကြောင်းရင်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ဒါအထူးသဖြင့်အခွန်နှုန်းထားများစုစုပေါင်း၏ 40% သကဲ့သို့မြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်ရှိရာအချို့သောအရပ်တွင်, အလိုအလြောကျကြှနျုပျတို့သညျဤဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်မည်မျှကြီးမား၏ထင်ဘယ်တော့မှသောအစိုးရ, ငါတို့၏ခက်ခဲရရှိခဲ့ပြီးငွေသိသိသာသာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆပ်ဖို့အေးစက်နေသောကြောင့်ဤသည်အဓိကအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် ဝင်ငွေ။ ဒါကကျနော်တို့ဝင်ငွေတိုင်းဒေါ်လာစျေးအဘို့ကိုဆိုလိုသည်, ကျနော်တို့အုပ်ချုပ်အာဏာပိုင်များထံ 40 ဆင့်ပေးဆောင်ရုံအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျနှံနဲ့ Hard အလုပ်ရှိနေသော်လည်း 60 ဆင့်အားရကျေနပ်မှုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ တစ်နိုင်တဲ့ macro စကေးအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ, သူကကျနော်တို့ဒီနှစ်အချို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်ကြာချိန်များအတွက်အခမဲ့အလုပ်လုပ်ယုတ္တိဗေဒမှရပ်သင့်ထံမှများမှာထိုအရပ်ကိုပေါ် မူတည်. တစ်လကနေလေးအထိဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒူဘိုင်း, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျယ်ပြန့်ဝင်ငွေအခွန်ဝန်ထံမှကျွမ်းကျင်သူများရပိုငျခှငျ့ကိုလူသိများသည်, သူတို့အားအရှင်ညျ့အဝရန်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ခက်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်အပျနှံခံစားရန်ခွင့်ပြု။
ယေဘုယျအားပိုကောင်း packages များ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုအနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဒူဘိုင်းအခြေစိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ join ဖို့ဒါစိတ်အားထက်သန်သောအဓိကအကြောင်းရင်းအလုပ်ရှင်များကိုဆက်ကပ်သောခြုံငုံလုပ်ခအထုပ်၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အထွေထွေစကေးတွင် packages များအခြားနိုင်ငံများတွင်အများစုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဆောင်မည်ဟုထက် 20% ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဤသည်ဒူဘိုင်းထွဋ်တလွှားကနေအကောင်းဆုံးအခွက်ထဲမှာဆွဲဆောင်မှထည့်သွင်းသောမူဝါဒဖြစ်ပါသည်။ အခွန်လွတ်ဝင်ငွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်အောင်ကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေပမာဏကိုမှမတ်တပ်ရပ်နိုင်။ ဥပမာတစ်ခုအဘို့, အခွန်ကောက်တစ်နှစ်အတွက် $ 100,000 ဝင်ငွေနှင့် 40% ပေးဆောင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်နှစ်လျှင်သာ $ 60,000 အိမ်မှာကြာပါသည်။ တူညီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့, ဒူဘိုင်း $ 120,000 ချေနှင့်သုညအခွန်နှင့်အတူအဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းကအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်။ ဒါကအခြေခံအားဖြင့်သူကပျော်ရွှင်စွာသည့်အခွန်အခများပေးဆောင်ပြီးနောက်ထားကြလိမ့်မယ်လို့နှစ်ကြိမ်ပမာဏကိုဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းအသင်တို့အဘို့အလုပ်လုပ်နေကြကြောင်းရုံ 20% ပိုမိုငွေပေးချေခဲ့ပေမယ့်, ထိုနေ့ရက်သည်၏အဆုံးမှာ, သင်လက်တွေ့ကျတဲ့မြေပေါ်တွင်နှစ်ဆလစာခံစားနေကြသည်။
အတွေ့အကြုံနှင့်အနေအထားနှင့်အတူ, အခွင့်အရေးနှင့်ငွေကြေးပြန်လည်ပေးချေလာကြ၏။ တစ်ဦး entry ကိုအဆငျ့အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်မန်နေဂျာတစ်ဦးသည်လစဉ်သံသရာအပေါ် AED 10,000 သလောက်၌သူ၏အရည်အချင်းများပေါ် မူတည်. AED 15,000 အကြောင်း AED 80,000 တစ်ဦးသည်လစဉ်လစာတစ်ဦးနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာလုပ်နိုင်တဲ့အိတ်ဝင်ငွေမယ်လို့နေစဉ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, မြောက်မြားစွာနဲ့အခြားအကျိုးခံစားခွင့်အလုပ်ရှင်ယေဘုယျအားဖြင့်အခမဲ့တည်းခိုနေထိုင်ရာမှ စတင်. နှင့်အတူတယ်လီဖုန်းဥပဒေကြမ်းများ, စောင့်ရှောက်မှုအဆောက်အဦ, တစ်နှစ်လျှင်တစ်ဦးပတ်ပတ်လည်လမ်းနေအိမ်လက်မှတ်နှင့်များစွာသောပိုပြီး၏လွှမ်းခြုံသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကမ်းလှမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။ ပြီးသား $ 120,000 ဝင်ငွေဟာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အခမဲ့တည်းခိုနေထိုင်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအခြေခံသာယာအဆင်ပြေမှုများအဘို့အအခွင့်အရေးတစ်နေရာရာမှာ $ 10,000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုန်းကျင်အထိလိမ့်မယ်။ ဤအမှုအရာပဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့အထွက်များမှာအသက်အရွယ်နှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ entry-level ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ခဲယဉ်းညှိနှိုင်းလိုအပ်ပါတယ်သော်လည်း ဒူဘိုင်း၏လမ်းများပေါ်တွင်။ ဒါကသူတို့လက်တွေ့ကျကျဂရုစိုက်ရန်မစရိတ်ရှိသည်နှင့်သူတို့ဝင်ငွေဖြစ်ကြောင်းအားလုံး ပို. ပင်နောက်ထပ်အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့, သူတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းအများစုသည်2နေ့စနေ၊ ဒါတွေကနည်းနည်းလေးပျော်စရာကောင်းတယ် အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်သူတို့၏အိမ်နှင့်မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအချိန်ကုန်ခံရန်တစ်လကြာအားလပ်ရက်ကိုတောင်ပျော်နိုင်ကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများစုလက်ခံရရှိရန်အများဆုံးလေယာဉ်လက်မှတ်ကိုညှိနှိုင်း။ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် များစွာသောမြတ်နိုးသောအိပ်မက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထပ်တိုးရန်, ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်အလုပ်များမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောအလုပ်သည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုမရှိပါ။ အလုပ်လုပ်နေတယ် ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်အဆောက်အဦးများ, ဗိသုကာသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာအဆင့်တွင်အကောင်းဆုံးကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအားပေးအားမြှောက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအကြား။ ဒါဟာနောက်ထပ်နှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ဦးချင်းစီပုံမှန်အလုပ်အချိန်ဇယားရှိနေသော်လည်းအများဆုံးဖို့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုပျော်မွေ့ကြောင့်မော်တော်ကားများနှင့်ဓာတ်ဆီကုန်ကျစရိတ်၏စျေးနှုန်းချိုသာနှုန်းထားများအားဖြင့်အားဖြည့်နေပါတယ်။
ဤအဓိကဖြစ်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အပူဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှသို့ဒူဘိုင်းလှန်သောအချက်များသူတို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်။ အလုပ်ရှာဖွေသူသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအတွက်ပွင့်လင်းမျက်နှာစာများလျှောက်ထားနိုင်သည့်မှတဆင့်မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းတွင်ကျယ်စွာ, စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် Expo အလုပ်ရှာဖွေသူသူတို့အဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်တစ်ဦးသင့်လျော်သောပရိုဖိုင်းကိုရှာဘို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကအစကသူတို့ရဲ့ website သို့သို့မဟုတ်အခြားအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုနှင့်အဓမ္မလျှောက်လွှာထဲမှာဖိုင်မှတဆင့်အဝေးမှအလုပ်ရှင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုကြော်ငြာရရှိနိုင်ပါအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုပိုမိုသိရန်အခြားရွေးချယ်စရာရှိနိုင်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းဝေါလ်ထရိတ်စင်တာထံမှ Burj Khalifa မှစတင်ကာနှင့်အကြား၌ရှိသမျှကိုဒူဘိုင်းပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယူအေအီးအတွက်စော်ဘွား၏ညီအစ်ကိုအပေါင်းတို့အကြားလူဦးရေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရွယ်အစားနှင့်ဒုတိယ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ 1833 ပြန်ထူထောင်ရှိတ် Maktoum ဘင် Buti အယ်လ် Maktoum, မသာဖြစ်ပါသည် အဆိုပါဧရိယာ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဒါပေမယ့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်နာမည်ကြီးအချက်အချာ။ ပြည်နယ်၏စံပြတည်နေရာကအထူးသဖြင့်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဘဏ္ဍာရေး, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်အများအပြားကပိုများ၏ကဏ္ဍများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစံပြရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏တောင်ဘက်-အရှေ့ပိုင်းဒေသများတွင်တည်ရှိသောကြောင့်အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများအတွက်ကမ်းလှမ်းအထူးသဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးများများအတွက်လက်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများတို့တွင်အများဆုံးနှစ်လိုဖွယ်အလုပ်နေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဒါကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောမူဘောင်မဟုတ်ပါဘူးသော်လည်းဒါဟာဒူဘိုင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒေသတွင်း၌ပထမဦးဆုံးရေနံရှာဖွေတွေ့ရှိ 50 နှစ်ပေါင်းထက်နောက်ကျောလျော့နည်းစတငျနှင့်သိသိသာသာအလွန်နိမ့်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်ထဲသို့မင်းသားပြည်နယ်လှည့် ဦးဆောင်ရေနံထုတ်လုပ်သူများထဲကတစ်ခုနှင့်ပြီးသား glob တလွှားကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အဆိပ်သို့အရပျကိုအသွင်ပြောင်းကြပါပြီအီး။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဏ္ဍပူးပေါင်းနှင့်၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုတိုးမြှင်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာရောက်စေဖို့အတှကျရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းထံမှထိုကဲ့သို့သောကြီးမားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူ, ကြီးမားမျက်နှာစာများဖွင့်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ အဆိုပါကဏ္ဍကိုတောင် 12,000 AED မှ 15,000 န်းကျင်အထိ Entry-level ကိုအင်ဂျင်နီယာများနှင့်မန်နေဂျာများအဘို့အနိမ့်ဆုံးလစာအကွာအဝေးနှင့်အတူကထိုက်သောသူတို့အဘို့ကြီးမားငွေများကိုခံစားခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အမြင့်ဆုံးပမာဏကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများအဘို့အ 80,000 AED သို့မဟုတ်မြင့်မားသောန်းကျင်အထိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလစာအထုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အရည်အချင်းများ, အတွေ့အကြုံနှင့်နိုင်ငံသားအပေါ်အခြေခံပြီးကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
ဒါဟာယူအေအီး၏စော်ဘွား၌အခြားသောဧရာမစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကြီးမားသောနိုင်ငံခြားငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့်အတူနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဤသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးသားတို့ကိုလက်ရှိကာလ၌ယင်း၏စီးပွားရေးကိုခိုင်ခံ့စေဘို့ပေါ်မှာမူတည်ကြောင်းဒါကြီးတွေစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ အဓိကငွေသားစီးဆင်းမှုကုန်တိုက်ကြီးတွေကနေကြွလာသျောလညျး, ခေတ်သစ်နှင့်လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေအဆောက်အဦများကိုလည်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်တွေအများကြီးထဲမှာဆွဲဆောင်။ ဒါ့အပြင်နိုင်ငံများတစ်ခုလုံးကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏စျေးဝယ်မြို့တော်ဖြစ်လူသိများ, ဒူဘိုင်းမြောက်မြားစွာမောလ်များ, စျေးဆိုင်, ဖက်ရှင်ဆိုင်များနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနှင့်အတူပေးအပ်သည်။ အသစ်ကအဆောက်အဦများ၏ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူမရေမတွက်နိုင်သောခရီးသွားဧည့်တစ်ဦးအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ခရီးစဉ်များအတွက်အနားယူနှင့်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကိုများစွာမြင့်တက်ရန်ဦးဆောင်ကြောင်းဧရာမငွေဖြုန်းဖို့အတွက်လာ။ အဘယ်အရာကိုအံ့အားသင့်ဖို့အပေါ်ဖြည့်စွက်ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံလုပ်ငန်းစော်ဘွားရဲ့ဂျီဒီပီ၏သာ 6% ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလက်ဝဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအများစုစေတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, ကတက်လာခြင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအလှူငွေ join ဖို့အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အထိပ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်စင်တာကိုပဌနာ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကဏ္ဍတွင်ပိုလတ်ဆတ်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုပူးပေါင်းနှင့်ပျော်မွေ့ဖို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖွင့်သည်။
ပြီးသားဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ခေတ်သစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လူမျိုးထဲတွင်အပြည့်အဝပွင့်၌တည်ရှိ၏။ မောလ်များအနေဖြင့်အဆောက်အဦရန်, ပညာပေးဌာနကနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချက်အချာဖို့, မြို့လုံးဝအသစ်ဖြစ်၏နှင့်အများကြီးပိုတက်လာရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဒီအဖွင့်လာခြင်းနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မင်းသားပြည်နယ်အတွင်းရှိ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုတခုအဖြစ်ဖို့အထူးသဖြင့်ဗိသုကာနှင့်အရပ်ဖက်အင်ဂျင်နီယာများ၏ကဏ္ဍများကနေ, ကကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများထဲကတစ်ခုစေသည်။ လိုအပ်သောအရည်အချင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်း လွယ်ကူစွာလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် မည်သည့်အရက်ဆိုင်မရှိဘဲအားလုံးရရှိနိုင်ရာထူးများအတွက်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တက်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၏မြင့်တက်လာရန်အားပေးတော်မူပြီသို့မဟုတ်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ၏မြင့်တက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဘို့အတွက်လမ်းခင်းထားပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ရှင်းပါတယ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာက, စျေးဝယ်ကဏ္ဍရုတ်တရက်မျာထည်းထည်းရှိပါသည်ကြောင်းဒူဘိုင်း၏ခရီးသွားဧည့်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်စှဲလမျးသူနေထိုင်သူများကိုကျေးဇူးတင်သည်။ 70 ကုန်တိုက်ကြီးတွေမကြာသေးမီကာလ၌ဒူဘိုင်း၌တည်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကြောင်းအလိုအလျှောက်တောင်းဆိုထက်ပို အလုပ်လျှောက်ထားရန်သက်ဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ။ အလုပ်လျှောက်ထားရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် MBA ဘွဲ့ဒီဂရီတတ်သော်လည်း, လက်လီသင်တန်းများအတွက်ဒီပလိုမာလက်မှတ်သိသာသူတို့ကိုကဏ္ဍ၌ကြီးစွာသောအလုပ် secure ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ လုံလောက်သောအတွေ့အကြုံ, လစာ, အခွင့်အရေးနှင့်အခြားအဆောက်အဦးများနှင့်အတူအတော်လေးမြင့်မားသောနိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားဖြစ်ကြောင်းအထင်ရှားဆုံးကဏ္ဍများတချို့ရှိနေပါတယ် လက်ရှိတွင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ခံပွင့်လင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်နိုင်ငံခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းအများကြီးဆွဲဆောင်။ အခြားအထိုကဲ့သို့သောပညာရေးကဏ္ဍအဖြစ်ကဏ္ဍများနှင့်အိုင်တီကဏ္ဍကိုလည်းသင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို၏ပြဌာန်းချက်မှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေ။ အပြင်ကနေ, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုလည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများထံမှကြီးမားသောပလီကေးရှင်းကိုဆွဲဆောင်။
ဒူဘိုင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးယောဘသည်ကမ်းလှမ်းချက် Secure ရန်သိကောင်းစရာများ
ဒူဘိုင်းအထူးသဖြင့်သူတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအားပူဇော်သည့်ပြိုင်ဘက်ကင်းအကြိုးခံစားခှငျ့အတှကျအကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အချုပ်ဆွဲဆောင်မှုတွေထဲကဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အခွန်-ကင်းလွတ်ခွင့်ဝင်ငွေ, ခြုံငုံတိုးမြှင့်လစာနှုန်း, မြောက်မြားစွာပန်းခြံများနှင့်အခြားအဆောက်အဦးများနှင့်အတူဒူဘိုင်း၏မျိုးစုံကဏ္ဍများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုမြင့်တက်အပေါ်အစဉ်မပြတ်ခဲ့ကြပြီ။ ထို့အပြင်ဦးဆောင်ခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပြည်နယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ခြင်း, အမျိုးမျိုးသောကဏ္ဍများအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်မြောက်မြားစွာမျက်နှာစာများဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ ဒေသတွင်း၌အဓိကစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ကဏ္ဍများထိုကဲ့သို့သောများစွာသောအခြားကဏ္ဍများအကြားဆောက်လုပ်ရေး, အိမ်ခြံမြေ, လက်လီစျေးကွက်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအဖြစ်ပါဝင်သည်။ ဒူဘိုင်း, အရှင်အခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး အားလုံးကျွမ်းကျင်သူများ၎င်းတို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဂရပ်တစ်ခုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုအပေါ် add နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တချို့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်အတွေ့အကြုံအပေါ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အတှကျ။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အောက်တွင်ဒူဘိုင်းအခြေစိုက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အလုပ်လျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူစတင်ရန်အချို့သောအကြံပေးချက်များဖြစ်ကြသည်။
လျှောက်ထားသူတစ်ဦး entry ကိုအဆငျ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့လက်ျာပရိုဖိုင်းကိုလျှောက်ထားကြသည်သကဲ့သို့ရှည်လျားအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်အရေးမထားဘူး။ အလုပ်ရှာဖွေသူများကသူတို့ကိုကိုက်ညီသောအရာကိုအကောင်းဆုံးကိုသိရန်အဘို့အဒူဘိုင်းအတွက်အများကြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲကဏ္ဍများအနက်ကလိုအပ်ပေသည်။ တိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားကဏ္ဍများနှင့်တိုင်းကဏ္ဍရှိပါတယ် မျိုးစုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တွေ့ရှိချက်လျှောက်လွှာ။ အလုပ်ရှာဖွေသူတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုကရွေးချယ်မှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ရန်အဘို့အဒါဟာအရှင်ချုပ်အရေးပါမှုသည်။ ဒါဟာအပေါ်ကိုရှေးခယျြဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဘို့အတော်လေးရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါတယ်။ များစွာသောသူတို့ကခငျြသောကွောငျ့တစ်ဦးအထူးသဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ချင်ပေမယ့်အချို့သောသူတို့ကလေ့ကျင့်သင်ကြားကြောင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကဏ္ဍ join ချင်တယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အရည်အချင်းများကျွမ်းကျင်မှု-based အလုပ်အကိုင်များမှတဆင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်တွေအများကြီးအရေးဤအခြေအနေတွင်လျှော့ပေါ့နည်းနည်းရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါစုဆောင်းမှု options များနှင့်အတူထိတွေ့ရယူခြင်း
ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းမျိုးစုံရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုလျှောက်ထားလိုသောမည်သည့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်။ သူတို့ကနှစ်စဉ်အလုပ်ရှင်များအိန္ဒိယနှင့်တခြားနိုင်ငံများအပါအဝင်ကနေအမြောက်အများ်ထမ်းခေါ်ယူမှုစေရှိရာအဓိကနိုင်ငံများတွင်ကျင်းပလျက်ရှိကြောင်းတစ်အလုပ်အကိုင်ကုန်စည်ပြပွဲ join လို့ရပါတယ်ဖြစ်စေ။ သူတို့ကတောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့အလုပ်ရှာဖွေသူများထံအပ်နှံအမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းတွင်ကျယ်စွာအပေါ်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်ထိုသူတို့အဘို့သင့်လျော်ညာဘက်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေလျှို့ဝှက်ထွက်ကိုကြည့်ရနိုငျသညျ။ နောက်ထပ် option ကိုနှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတချို့ပိုက်ဆံကောက်ခံစေခြင်းငှါအမျိုးမျိုးသောစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများတက်သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။ အတော်များများကထိုကဲ့သို့သောအတုအေဂျင်စီများကခက်ခဲအလုပ်ရှာဖွေသူများယုံကြည်စိတ်ချနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မြေပေါ်တွင်ဖို့ဘယ်သူကိုသိရန်အဘို့အအောင်လက်ရှိကာလ၌ဖွင့်လာကြပါပြီ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများပင်အဖွဲ့အစည်းများ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်ကိုတက်စစ်ဆေးကာအဖုံးစာတစ်စောင်နှင့်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်အတူသင့်လျော်သောနေရာလွတ်ဘို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချို့မိတ်ဆွေများ, မိသားစုဝင်များသို့မဟုတ်ပြီးသားကတခြားအသိအကျွမ်းအဖြစ်တစ်ဦးကပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ယက်ကို ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်နောက်ထပ် option ကိုဖွစျစနေို။ အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုတောင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူတို့ရဲ့အထောက်အထားများကိုက်ညီမယ့်သင့်လျော်သောပရိုဖိုင်းကိုရှာဒူဘိုင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအလုပ်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရရန််ထမ်းရှာဖွေသူနှိုးဆော်ခြင်းတစ်ဖုံးစာကိုအတူတက်လာမယ့်အတော်လေးခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အေဂျင်စီများဝန်ဆောင်မှုတာဝန်ခံ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ကြောင်းဖွင့်လာကြပြီ။ မျက်နှာဖုံးစာတစ်စောင်၏အဓိကအာရုံနှစ်ခုအခြေခံအမှုအရာအပေါ်ဖြစ်သင့်သည်။ ကနဦးက, အာရုံစူးစိုက်မှုအလုပ်များအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသင့်လျော်စေသည်ဘာကိုဖျောပွအပေါ်ဖြစ်သင့်သည်။ အပြင်ကနေကအလုပ်ရှင်ရှိသမျှသည်အခြားသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတို့တွင်အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေသူကိုရှေးခယျြသငျ့သညျအဘယျကွောငျ့ကိုလည်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါကအလုပ်ရှင်အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းငှားရမ်းစဉ်ခံစားဖို့မြျှောလငျ့နိုငျအပိုဆောင်းသောအရာကိုအကြိုးကြေးဇူးမြားဖျောပွပါဝင်သည်။ ဒါဟာကိုယ့်ကပ်လျက်တည်ရှိလာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းများအတွက်, တတ်နိုင်သမျှဖုံးစာတစ်စောင်အတွက်စာဖတ်သူကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
မည်သည့်အလုပ်လျှောက်လွှာဘို့ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ပြောတတ်သောကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာအလုပ်ရှာဖွေသူသိရန်ရရှိသွားတဲ့အရာကနေတဆင့်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပညာသင်နှစ်အရည်အချင်းများ, ယခင်အလုပ်အတွေ့အကြုံများကို, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တန်းများ, ဆောင်ရွက်စီမံကိန်းများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်ရာအခြေခံအသေးစိတ်ကိုအပါအဝင်အလုပ်ရှာဖွေသူအကြောင်းကိုအားလုံးအသေးစိတ်ဆံ့သငျ့သညျ။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများအတွက် format နဲ့တိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်ကွဲပြားစေခြင်းငှါနေစဉ်, ကျစ်လျစ်တစာမျက်နှာကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူတက်လာမယ့်ဒူဘိုင်းတစ်မကောင်းတဲ့ option ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ သော်လည်းအရွယ်အစားကသုံးအတူတက်လာရန်မဖြစ်နိုင်လျှင်စာမကျြနှာအနည်းဆုံးစုံတွဲတစ်တွဲအတူတက်လာမယ့်အတန်ငယ်အသီးအနှံများနိုင်ပါတယ်, အကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏အရည်အချင်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ အမှုအရာရာ၌ဝါကြွားသို့မဟုတ်ပုံကြီးချဲ့အဖြစ်အားလုံးအမှန်တရားတွေဖော်ပြရန်အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုချက်ချင်းအလုပ်ရှာဖွေသူ၏ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံ disqualify နိုငျသောကွောငျ့ဒါဟာလိုအပ်ပေသည်။
တစ်နေလျှင် အလုပ်ရှာဖွေသူကိုယ်ထိလက်ရောက်အလုပ်လိုက်ရှာဖို့ဒူဘိုင်းသွားသူတို့ကသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်အဘယ်သူမျှမရှိပါလိမ့်မယ်အဖြစ်အမှုအရာကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းတွင်ကျယ်စွာ, ဝက်ဘ်ဆိုက်များ, Expo သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများမှတဆင့်လျှောက်ထားစဉ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေချောမွေ့လျှောက်လွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏စီးဆင်းတချို့လမ်းညွှန်မှုခံစားဖို့မျှော်လင့်နိုင်ပါ။
အင်တာဗျူးသင့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး CV ကို, ဖုံးစာတစ်စောင်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်, နှင့်နောက်ဆုံးနေ့နှုန်းအဖြစ်ဆက်ပြီးနောက်သင်တစ်ဦး panel ကိုရှေ့မှာမျက်နှာပြရှိသည်။ အင်တာဗျူးသင့်ရဲ့အစွမ်းအအကဲဖြတ်ရန်နှင့်သင် CV ကိုအပေါ်ဖော်ပြထားအရာကိုတည်ထောင်ရန်ရှိသည်။ အများအပြားအလုပ်ရှင်များစေရန်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အချင်းများလျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကိုသာအခြေခံသည်။ အင်တာဗျူး၏အနှစ်သာရမှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့အလားအလာန်ထမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်နှင့် စွမ်းရည်ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူသင့်လျော်သောများမှာ.
သင်ကအင်တာဗျူး panel ကိုမရောက်မီကိုယ့်ကိုကိုယ်သက်သေပြဖို့ရှိသည်။ ဘယ်လိုသင်တံခါးဝမှာ step ယခုအချိန်တွင် မှစ. , အင်တာဗျူးနေ့၏တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသယ်ဆောင်သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာဆုံးဖြတ်သည်။ ယူအေအီးလျှင်မြန်စွာနည်းပညာပေါင်းစပ်သောကမ္ဘာကြီးအနှံ့ထိပ်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အကြောင်းမဲ့ပါလိမ့်မည်အင်တာဗျူးအမျိုးအစားကိုသိဘယ်တော့မှ; အချို့အလုပ်ရှင်များတစ်ဦးအံ့အားသင့်ဆွဲထုတ်ချင်လိမ့်မယ်။
အလုပ်ရှင်များကိုသင်ပြုမူခြင်းနှင့်စကားပြောမည်သို့ပြင်ဆင်ထားလာမယ့်နေကြသည်ကိုသတိထားမိပေမယ့်သူတို့ကသင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအရချင်တယ်။ တစ်ခုကအလုပ်ရှင်သင်ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံ့ပြန်ပုံကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ CCTV ကသတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မသတ်မှတ်ပါလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာသင်သိဘယ်တော့မှ, အင်တာဗျူး၏အခြေခံလှည့်ကွက်သည်။ သငျသညျတံခါးဝကနေလူတိုင်းနဲ့သင့်လျော်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားများနှင့်သင့်လျော်သောအပြန်အလှန်နဲ့စတင်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသုတေသနသင့်ပါတယ်နေစဉ်, သင် panel ကိုမှာတွေ့ဆုံမည်သူဌေးကသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသိတော့မှပေလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်အင်တာဗျူးကြောက်မနေသင့်။ ဤတွင်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်အချို့သောအကြံပေးချက်များများမှာ.
သင့်ရဲ့အနေအထားနှင့် ပတ်သက်. သုတေသန
သင်တစ်ဦးအလုပ်အနေအထားမှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်သင့်သည်။ အလုပ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏စံကျွမ်းကျင်မှုသာမကလိုအပ်ပါတယ်ဘယ်အရာကိုထွက်ရှာမည် ဒါပေမယ့်ဘာအလုပ်ရှင်အနေအထားကိုဖြည့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ခန့်မှန်းထားသည်။ အပြင်အလုပ်ဖော်ပြချက် မှစ. , အလုပ်ရှင်များအနေအထားကိုကိုက်ညီမယ့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးချင်တယ်။ Professional ကကျွမ်းကျင်မှုအလုပ်ရှင်များကအလုပ်အတွက်ရှာအံ့သောငှါအဘယျသို့သောကြောင့်စားဆင်ယင်ကုဒ်သို့မဟုတ်သင်မည်သို့မပြောတတ်အကြောင်းကိုနိုင်ပါတယ်သာအစွန်အဖျားဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဟန်ဆောင်နှင့်သင့်အလားအလာအလုပ်ရှင်နှင့်အတူအခမဲ့မဖြစ်သင့်နေစဉ်, သင်မျှော်မှန်းထားစံချိန်စံညွှန်းမှတက်ကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်လျှင်, တူညီတဲ့ရပ်တည်ချက်အတွက်ယခင်န်ထမ်းတွေအကြောင်းထွက်ရှာပါ။ သငျသညျထိုလယ်၌အတှေ့အကွုံရှိပါကသင်အလုပ်ရတဲ့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ယခင်ဝန်ထမ်း left နှင့်အလုပ်ရှင်တို့ကတောင်းဆိုစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်ကိုအဘယ်ကြောင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးထွက်ရှာပါ။
အဲဒီအစားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ကိုလေ့လာအပေါ်နေသော၏, လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအကြောင်းပြောဆို။ သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးနှင့်အတူဝေမျှမယ် အောင်မြင်မှုများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများ အလုပ်ခွင်မှာ။ သင်ကပါဝငျသောအရာကိုသိသောကြောင့်ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလုပ်အဘို့အ fit သက်သေပြမယ့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်များကလယ်ပြင်၌လက်တွေ့ကျသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းမျက်နှာသာ။ သငျသညျ, ယူအေအီးအတွက်လအနည်းငယ်အတွင်းအလုပ်လျှောက်ထား add-on ကိုကျွမ်းကျင်မှု, သင်၏အတွေ့အကြုံအပေါ် add ဖို့နေရာရှာတွေ့မှမျှော်လင့်နေကြသည်ဆိုပါကအာရဗီလူမျိုးထဲတွင်အလုပ်ရှာတွေ့ဘို့အလွန်အရေးပါသည်။
အများစုမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများအလုပ်စွမ်းရည်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုမှားယွင်း; အလုပ်ခွင်မှာစွမ်းဆောင်ရည်အစစ်အမှန်အခြေအနေတွေအတွက်သီအိုရီ၏လျှောက်လွှာလိုအပ်သည်။ အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း, ဒီအားလုံးအနေနဲ့အလုပ်ရှင်စကားကိုနားထောငျဖို့လိုလားသည်။ သင်၏ CV ပြီးသားသင်သည်အင်တာဗျူးအဘို့အခွင့်အလမ်းပေးသနားတော်မူပြီ ထို့ကွောငျ့, အတှေ့အကွုံအားဖြင့်သင်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုအကြောင်းပိုမိုရှင်းပြဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ်ကယူပါ။ အင်တာဗျူးသင်အလုပ်ပါဝငျနှင့်တာဝန်အထိအရာကိုသိအလုပ်ရှင်လာအောင်အကြောင်းပါ။
ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်အပေါ်အခွခေံယေဘုယျအလုပ်ဖော်ပြချက်အပြင်, သငျသညျကုမ်ပဏီ၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျအဖွဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့တိကျတဲ့အခန်းကဏ္ဍ။
အင်တာဗျူးတစ်ခုနှစ်ခု-လမ်းစကားလက်ဆုံဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သိပ်မပြောတတ်ကြဘူး။ သူတို့ကအိမ်ရှင်များမှာကြောင့်အင်တာဗျူး session ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဖြစ်ပါစေသော။ သင်သည်သင်၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်ပီပီဖြစ်ပြီးဝိုးတဝါးကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်နေစဉ်, လွန်းပြောနေတာဟာ panel ကိုမှပျင်းစရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူကသင့်ရဲ့အလုပ်ရာထူးရှုံးသောအခါဖြစ်စေခြင်းငှါအရာတစ်ဦး Dominic ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ သငျသညျနားမထောငျထက်ပိုစကားပြောရန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်တာဗျူးအဖြစ်လွန်းစကားပြောသောလည်းညွှန်ကြားချက်ယူပြီးဆင်းရဲသားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအင်တာဗျူး panel ကိုအလွယ်တကူသိပ်အလုပ်သကဲ့သို့သငျသိသငျသညျကိုချွတ်ရေးလိုက်ပေလိမ့်မည်။
အများကြီးစကားပြောသည့်အခါအပြင်သင်အလွယ်တကူဆီလျှော်နိုင်ပါတယ်။ သင်၏လျှာတစ်ဉာဉ်ဆိုးချော်နှင့်သရုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျစိတ်ချလက်ချအင်တာဗျူးဖြေလျော့ခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံသင့်သော်လည်းလွန်းအခမဲ့ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါဟာချိန်ခွင်လျှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးအဘို့အသွားအခါသင်တိုင်းလမ်းအတွက်အပြုသဘောဖြစ်သင့်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျသုတေသနနှင့်အလုပ်လွဲချော်ဖို့မျှော်လင့်နေချိန်မှာတက်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့အချိန်ကိုမဖြုန်းပါနဲ့။ သို့သျောလညျးသငျသညျတုံ့ပြန်ချက်မဆိုပုံစံကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိဖြစ်သင့်သည်။ အဘယ်အရာကိုမျှယူအေအီးအတွက်သိသာဖြစ်ပါသည် အလုပ်ဈေးကွက်။ အလုပ်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသင်သည်မည်သည့်လမ်းအတွက်မလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဒါဟာတဦးတည်းအနေအထားဖြစ်လိမ့်မယ်နဲ့သင်တဦးတည်းကျန်ရစ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ဤအရပ်မှအတော်ကြာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်ကြသည်။ ပွင့်လင်းစိတ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်များအဘို့ဆွဲဆောင်မှုမရှိဖြစ်သည့်, သင်အဆင်မပြေမှုထဲကနေဖို့ကူညီပေးသည်။
ယူအေအီးအတွက်7အရာတစ်ဦးကယောဘကိုရှာသူသိထားသင့်
ယူအေအီးအကျိုးအမြတ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။ သို့သော်အာရဗီလူမျိုးထဲတွင်အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့သိသာမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျ, အသီးအသီးအလုပ်ရှင်များအတွက်တိကျသောလိုအပ်ချက်များယဉ်ကျေးမှုနားလည်ပြီး, ဖြစ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးနည်းလမ်း၌သင်တို့၏အဖုံးစာတစ်စောင်ကိုတင်ပြရန်ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလားအလာအပြင်, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်က အလုပ်ရှင်ဒါပေမယ့်လည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမသာ၏။ ဒါ့အပြင်သင်ဟာအလုပ်ရှာဖွေရေးအပေါ်နေချိန်မှာမဆိုနောက်ဆုံးမှာမှရှောင်ရှားရန်ဥပဒေရေးရာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်ရှိသည်။
အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်, ဒီဝေးသင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီးထံမှဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ, သင်လိုအပ်သမျှအလုပ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုလစာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျမကြာမီသင်တစ်ဦးချိုးငြိမ်ဝပ်စွာနေသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းအဖြစ်မှန်ရောက်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်, သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည့်အခါ, တစ်ဦးအားလပ်ရက်အရေးကြီးပါတယ်။ ယူအေအီးအများစုသည်ကုမ္ပဏီများသည်ပြည်တော်ပြန်များအတွက်နှစ်စဉ်ခွင့်အဖြစ် 30 ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းခွင့်ပြုပါ။ သင်က 30 ရက်ပေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သမျှသောအများပြည်သူအားလပ်ရက်များအတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်။ နေမကောင်းခွင့် paid အားလပ်ရက်၏ 22 အလုပ်လုပ်နေ့ရက်တို့ရေတွက်မပေးပါ။
ဒါဟာမသက်ဆိုင်ဘဲမူလကသင်၏ဇာတိတိုင်းပြည်အကွာအဝေး၏, သင့်လာရောက်လည်ပတ်သူစီစဉ်ဤအားလပ်ရက်ရက်ပေါင်းနှင့်အတူစကားပြောဆိုမှုဖြစ်အရေးပါသည်။ ဤအနှင့်အတူ Familiarizing သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှင်အနေနဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်ထုံးစံ၌ခေါင်းစဉ်ပြုစုပျိုးထောင်ရှောင်ရှားကူညီပေးပါမည်။
ယူအေအီးဤအရပ်မှအာရဗီလူမျိုးကိုကော်ပိုရိတ်ကမ်ဘာပျေါတှငျရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် Arabic အဘိဓါန်များကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏နေရာထိုင်ခင်းအဘို့အသဘောတူညီချက်ငှားရမ်းဖို့အလုပ်အကိုင်စာချုပ်ကနေဘာသာစကားကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ပိုမိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မည် သင်ဘာသာစကား၏အယူအဆတခုရှိသည်ဆိုပါက; ထို့ကြောင့်ကြောင့်ယူအေအီးမှရွေ့လျားမတိုင်မီတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးလုံးဘာသာစကားနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ပညာရှိဖြစ်၏။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။
သို့သျောလညျး, ယူအေအီးပြည်တော်ပြန်ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့လုပ်သားအင်အားနှင့်အတူနာမည်ကျော်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်, ဒူ, ဟိန္ဒူ, နဲ့ဖာစီကတခြားနိုင်ငံခြားဘာသာစကားများကြားတွင်ဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်လေကြောင်းလိုင်းများနှင့်မောလ်များအပါအဝင်ဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အများဆုံးကုမ္ပဏီတွေအများအပြားဘာသာစကားများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်န်ထမ်းလိုအပ်သည်။
တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်, သင်တစ်ဦးခရီးသည်အဖြစ်သာသွားရောက်လည်ပတ်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးယူအေအီးနိုင်ရန် VISA လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကယူအေအီးရန်သင့်အား entry ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြိုတင်သင့်ရဲ့ entry ကိုအနည်းဆုံး3လကြာတဲ့အလုပ်ပါမစ်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ သငျသညျအလုပျတ secure လျှင်တစ်ဦးကအမြဲတမ်းအလုပ်ပါမစ်သို့မဟုတ်ဗီဇာနောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ခွင့်ပြုမိန့်၏အသက်ရှည်သင့်ရဲ့စာချုပ်အပေါ်မှီခိုရလိမ့်မည်။
တစ်ဦး Arabic အဘိဓါန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခြင်း, အစ္စလာမ် Dominic ဘာသာတရားဖြစ်ပါသည် အများဆုံးမြို့ကြီးများရှိ။ ဒါဟာတရားဝင်ဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအလားအလာအလုပ်ရှင်ထိ မိ. လဲစရာကိုရှောင်ရှားဖို့သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားများ၏အခြေခံသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတွေအတူလက်ဆွဲအစပျိုးပါဘူး, ဒါဟာမသင့်လျော်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အဘူဒါဘီနဲ့ဒူဘိုင်းနဲ့တူအဓိကမြို့ကြီးများအတွက်အလုပ်ရှင်များလိုက်လျောညီထွေနှင့်အခြားဘာသာတရားလေးစား။
ယူအေအီးပညာရှင်များနှင့်အတူရေပန်းစားသည်နှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးမားတဲ့လုပ်သားအင်အားကိုဆွဲဆောင်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကြောင့်အခမဲ့အခွန်စနစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအခွန်။ ဒူဘိုင်းနဲ့တူအဓိကမြို့ကြီးများတွင်နေထိုင်သော၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေပေါ်တွင်နောက်ထပ်ရာခိုင်နှုန်းမှစွပ်စွဲနေပါတယ်။ အဆိုပါဧညျ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကုမ္ပဏီတွေဥပဒေကြမ်းများအပေါ် 10% တာဝန်ခံပျမ်းမျှထည့်သွင်းဖို့အတှကျဒါဟာဘုံဖြစ်ပါတယ်။ Tipping ကြောင့်ဥပဒေကြမ်းများအပေါ်ဒီအပိုရာခိုင်နှုန်း၏ယူအေအီးအတွက်ဘုံမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သျောလညျးသငျသညျဝန်ဆောင်ခဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်မှာ, အခါတိုင်းသင့်ရဲ့ဥပဒေကြမ်းများစစ်ဆေးဘယ်မှာလိုအပ်သောရေသွန်သင့်တယ်။
ယူအေအီးမူဝါဒများများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။ သငျသညျပညတ်တရား၏အမှားယွင်းတဲ့ဘက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကြောင့်ကော်ပိုရိတ်သို့မဟုတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ် non-လိုက်နာမှုများအတွက်ကြီးမားသောဒဏ်ငွေပေးဆောင်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးတင်းကျပ်ပါ၏ သင့်ရဲ့အလုပ်အနေအထား၏တရားမသက်ဆိုင်ဘဲမူလပေါ်မျှအပေးအယူ။ အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ CV ကိုအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောအံ့သောငှါမဆိုမလိုလားအပ်သောကုန်ကျစရိတ်များသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားတို့ကိုမှတ်တမ်းများကိုရှောင်ရှားချင်ပေလိမ့်မည်။ အလုပ်ရှင်များကိုကျင့်ဝတ်နှင့်အလောကဝတ်အပေါ်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ မဟုတ်အမှိုက်သရိုက်များသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုတံတွေးထွေးသလား, ယူအေအီးဥပဒေများကိုတင်းကြပ်များမှာ!
ဆိုတဲ့အချက်ကို ယူအေအီးမူဝါဒများနှင့်တင်းကျပ်သောဥပဒေများအပေါ်စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပြည်ပရှိအဖြစ်အသက်ရှင်ရန်အလုံခြုံဆုံးနိုင်ငံများတွင်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်တရားဝင်ဘာသာတရားအဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာကျင့်ဝတ်နှင့်အချောမွေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းဆိုနေပြီ။ ယူအေအီးကြောင့်ယဉ်ကျေးမှု, ဘာသာတရားအဖြစ်ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတပ်ဖွဲ့များတစ်ဦးအနိမ့်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းမှာရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်တမြို့လုံး၌ရှိသမျှသောထောင့်ရှိလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဖို့စက်ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာ၏လုံခြုံရေးအပိုင်းပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, လုံခြုံပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံအတွင်းတိုးပွားလာကျွမ်းကျင်သူများလုပ်သားအင်အား၏တစ်ဦးဦးဆောင်အကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။
အများပြည်သူအတွက်ထုတ်ဖော်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်ရှောင်ကြဉ်ပါ, ထိုသို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဆန့်ကျင်သည်။ ဒါဟာထိုးစစ်စဉ်းစားသည်။ ဒါ့အပြင်အများပြည်သူကမ်းခြေများတွင်တစ်ဦးတည်းရေကူးအန္တရာယ်ရန်သင့်အားဖော်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
ယူအေအီးလုပ်သားအင်အားကို Join ဤအအကြောင်းရင်းများနှင့်အတူ familiarizing ပြီးနောက်!
ယူအေအီးကွဲပြားခြားနားပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်များတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပြည့်ဝ၏။ သို့သော်လူတိုင်းမ, အာရဗီလူမျိုးထဲတွင်အလုပ်အင်တာဗျူးနှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းကိုသိသောသာအနည်းငယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏တိုးပွားလာယှဉ်ပြိုင်မယ့်အလုပ်လေယာဉ်ဆင်းသက်အတွက်အင်တာဗျူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုအရေးကြီးသောစေသည်။ ဒါဟာအလုပ်ရှာဖွေရေး၏အရေးပါသောဇာတ်စင်ဖြစ်၏ သငျသညျအလုပ်ရှင်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်သုတေသနနှင့်သင့်လယ်ပြင်နှင့်အတူစိတျဝငျစားတဲ့လမ်းအတွက်ပြုမူရန်ရှိသည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုကခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ဖို့စေသည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းအသိပညာနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုအလွယ်တကူတစ်ခုအလုပ်ရှင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းတွေ့ရမယ်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အရေးပါတဲ့ element ဖြစ်ပါတယ်ရေးသားတင်ပြပုံ။ သို့သော်သာဆန်ခါတင်စာရင်းအဘို့, အရှိဆုံးအရေးပါဇာတ်စင်အင်တာဗျူးဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးပေးဖို့ရှိသည်တဲ့အခါဒီဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင် CV ကိုဖော်ပြထားအရာကိုလက်တွေ့သက်သေပြရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးဖြတ်သန်းဖြစ်နိုင်သောအင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုသုတေသနပြုထက်အများကြီးပိုပါဝငျသညျ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, သင်လျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်ရှိသည်။ ဒါဟာအကျိုးစီးပွားနှင့်ကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကတိကဝတ်ပြသထားတယ်။ အများစုမှာအလုပ်ရှာဖွေသူများအင်တာဗျူးတွေ, ဆက်သွယ်ရေး၏အရေးပါသောအသှငျအပွငျလက်လွတ်; ဒါကြောင့်မကြာခဏသာမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းများအတွက်မှားဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးတစ်ခုနှစ်ခု-လမ်းကိစ္စဖြစ်သင့်သည်, အင်တာဗျူးနှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူအကြားဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သင့်သည်။ တကယ်တော့သင်ညာဘက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီရန်မေးခွန်းများမေးသင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းစဉ်အတွင်းနှင့်အင်တာဗျူးပြီးနောက်ရှေ့တော်၌, စိုးရိမ်ပူပန်ရရှိသွားတဲ့နေစဉ်, လုံလောက်သောပြင်ဆင်မှုကိုသင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အလုပ်အကိုင်အရကူညီကြမည်
တစ်သင်းလုံးကကစားသမားတစ်ဦးအင်တာဗျူး၏အမြင်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ပထမဆုံးတွေ့ကြုံ, အတူလုပ်ဖို့အရာအားလုံးရှိပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လူတွေဟာတရားဝင်ဝတ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားထားနေကြသည်။ ယောက်ျားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝတ်စုံဝတ်ဆင်စဉ်အမျိုးသမီးများအလယ်အလတ်နှင့်ရဲရင့်အရောင်-ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်။ ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအင်တာဗျူးအထင်ကြီးဘို့ကိုသာအခြေခံသည်။ သငျသညျတရားဝင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့ရှိသည် ဖြစ်. , ပညာရှိဖြစ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏စားဆင်ယင် code ကိုထွက်ရှာပါ။ အလုပ်ရှင်များအဝတ်အစား၏ဦးစားပေးအပေါ်ကွာခြား။
ယဉ်ကျေးမှုယူအေအီးရှိလူများအဘို့အအရေးကြီးပါသည်။ တစ်သင်းလုံးကကစားသမားယဉ်ကျေးမှု၏သိသာထင်ရှားသောဒြပ်စင်၏, ဒီပထမဦးဆုံးအစှဲအောင်၌သင်တို့၏ Starting Point သို့ဖြစ်သင့်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏သေံထွက်ရှာပါနှင့်သင့်လျော်စွာဝတ်ဆင်။ အလုပ်ရှင်သူတို့မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့သင်တို့ဝတ်စားဆင်ယင်လို့သင်၌အကျိုးစီးပွားရရှိပေလိမ့်မည်။
လူအများစုဟာအင်တာဗျူး၌ထလာစေခြင်းငှါမေးခွန်းများကိုအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ ဒါဟာဘုံစိုးရိမ်လျက်ရှိ၏ အင်တာဗျူးမျှော်လင့်ချက်များနှုန်းအတိုင်းညာဘက်အဖြေကိုရှာတွေ့။ အင်တာဗျူးကနေတစ်ဦးကဘုံဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတိကျတဲ့လယ်ပြင်နှင့်တကွသင်လှုံ့ဆျောတယျ။ အလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများကိုကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်အပေါ်ကွာခြား။ သငျသညျထိပ်တန်းအလုပ်ရှင်များစိစစ်ရန်သင့်အားလက်အောက်ခံဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်မှတသမတ်တည်းယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ ကိုပြင်ဆင်ရမည်။
ဒါ့အပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်တွင် အခြေခံ. သင့်ရဲ့အားသာချက်, အားနည်းချက်များကို, အခွင့်အလမ်းများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ သငျသညျအလုပျတရတဲ့၏အင်တာဗျူးအားဖြင့်လိုအပ်သောဤအရပ်မြင့်သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုအဖြစ်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းတစ်ဦးလွယ်ကူသောအချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုက်ညီသောအလုပ်ရှင်အမျိုးအစားကိုသိသင့်ပါတယ်။ လက်ျာအလုပ်ရှင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွားစေပါသည်။
ပထမဦးစွာသင် Arabic အဘိဓါန်ပွညျ၌များမှာစိတ်ကိုထားနှင့်သူတို့အမှားအမှန်ကိုစဉ်းစားရာ၏အခြေခံရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုစှဲအောင်အကြောင်းသတိရပါ။ သူတို့အင်တာဗျူးဘို့သင့်ကိုပဏာမမတိုင်မီတကယ်တော့, သင်သည်သင်၏အရည်အချင်းများနှင့်အဖုံးအက္ခရာအားဖြင့်အလုပ်ရှင်ယုံကြည်ကြပါပြီရပါမည်။ သို့သော်သူတို့ကငှားရမ်းမတိုင်မီတစ်ဦးချင်း၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အပြုအမူများသေချာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးအတွက်စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ဆုံးနှင့်အရေးပါသောအဆင့်ဖြစ်ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
, သင့်လျော်စွာလျော်သောစကားလုံးရွေးချယ်မှုဆေးထည့်ခြင်း, သာယာသောမျက်နှာစောင့်ရှောက်ခြင်းထက်အခြားကိုသင် Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှု၌နက်ရှိုင်းသွားပါသင့်တယ်။ တစ်ဦးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေတဲ့ကြင်နာအမူအရာဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်ဦးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပူဇော်ဖို့မသင့်လျော်သည်။ သငျသညျသူတို့ကိုလက်ဆွဲအစပျိုးရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းချွတ်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးသောက်စရာကမ်းလှမ်းမှုကိုငြင်းဆန်လျှင်ဒါ့အပြင်အာရဗီယဉ်ကျေးမှုကရိုင်းစိုင်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သငျသညျကော်ဖီ, လက်ဖက်ရည်, ဒါမှမဟုတ်ရေတစ်ခွက်ကိုကမ်းလှမ်းနေကြတယ်သောအခါ, ကောက်ဖို့သေချာပါစေ။
ဘုံလောကဝတ်အကြံပေးချက်များတစ်ဦးထိုင်ခုံပူဇော်မြေတပြင်လုံး panel ကိုအတူမျက်လုံးချင်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်မေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါအလယ်အလတ်သေံထိန်းသိမ်းထားဖို့အင်တာဗျူးအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပါဝင်သည်။ ဖြောင့်ထိုင်, အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံများတွင် slouch မထားပါနဲ့။ အင်တာဗျူးစဉ်ကခြေထောက်နှင့်လက်အားနဲ့တူအလွန်အကျွံခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ယူအေအီးအတွက်အင်တာဗျူးအပေါ်, ကမလေးစားစဉ်းစားနေစဉ်ရုံရှိသမျှသောလောကီအခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လိုပဲမိုဘိုင်းဖုန်းမသုံးကြဘူး။
သိသာထင်ရှားတဲ့, သင်စုဆောင်းမှုလိုင်းပေါ်တွင်တစ်ဦးတည်းသာမဟုတ်။ ဖြစ်ကောင်းအခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းထံမှသင်တို့ထူးခြားမှုဖြစ်စေသည်သောတစ်ခုတည်းသောရှုထောင့်လစာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးလစာဖျော၌သင်တို့၏အတွေ့အကြုံနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်နေစဉ်, သငျသညျစျေးကွက်မှုနှုန်းထက်ပိုဖော်ပြခြင်းငှါမပညာရှိဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သငျသညျအိမျကနေဝေးအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်အနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဆန္ဒရှိဖြစ်ကြပြီးအရည်အချင်းပြည့်မှီဖို့စာတမ်းများရှိပါကယူအေအီးအတွက်နိုင်ငံခြားသားများအဘို့များစွာသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများရှိပါသည်။ အတော်များများကဗြိတိန်, အမေရိကန်ကနေဒါနှင့်အခြားသူများအကြားတရုတ်အများကြီးကန့်သတ်သို့မဟုတ်လုပ်ရတဲ့မပါဘဲအလုပ်အကိုင်များကိုတက်ယူပြီးအတွက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီ။ မူဝါဒနှင့်စည်းမျဉ်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ရရှိနိုင်လျောက်ပတ်သောလစာရှိပါတယ်။
သင်ကြားရေးအလုပ်အကိုင်များနိုင်ငံခြားသားများယူအေအီး၌ထယူအသုံးအများဆုံးအလုပ်အကိုင်များအကြားရှိပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းရင်းစော်ဘွားအတွက်အစိုးရကအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှပညာရေးဆိုင်ရာ system ကိုမြှင့်တင်ရန်ဦးတည်သည်၎င်း၏အားထုတ်မှုညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ်ကမ္ဘာအတွက်အသိပညာ-based လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ခြင်းကရေရှည်တည်တံ့တဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကြာသောအရာကိုနှင့်အတူအနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်တပ်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလူမြိုးခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်း core တန်ဖိုးများလူ့တန်ဖိုးများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်လင်းမြင်သာမှုမှကတိကဝတ်တည်ထောင်ရန်ရှာကြာလော့။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်သားအင်အားရှာဖွေတာပန်းတိုင်မှီဖို့လုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား
အစိုးရကျောင်းများတွင်အရေးယူသို့မဟာဗျူဟာများထားရန်နေရာအရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒီပတ်သတ်ပြီးနှင့်တကွ, အလုပ်သမားဝယ်လိုအားအပေါ်မြင့်မားသည်။ အစိုးရက၎င်း၏ပညာရေးစနစ်ကမြှင့်တင်ရန်နိုင်ငံခြားလုပ်သားအင်အားအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျောင်းတွင်ကြီးမားရန်ပုံငွေလက်ခံရရှိနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှကလေးများကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ကျောင်းကိုရဖို့အခွင့်အလမ်းပေးကြဖို့အမျိုးသားရေးဘတ်ဂျက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုခွဲဝေပါပြီ။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦး Ultra-ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အမြိုးသားအကွိုတငျပွငျဆငျဖို့ဆန်းသစ်မှုစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအင်္ဂလိပ်အလတ်စားဆရာအစီအစဉ်ကိုအပေါ်အလေးပေးတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ထို့ကြောင့်စနစ်အားလုံးအဆင့်ဆင့်သင်ကြားသည်။ ဒါဟာသင်္ချာနှင့်သိပ္ပံနှင့်အတူအဓိကဘာသာရပ်များအကြားတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်အခြားသူများကထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, ဘဝကကျွမ်းကျင်မှု, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်ဒီဇိုင်းနည်းပညာအဖြစ်လက်တွေ့ကျတဲ့အသိပညာဘာသာရပ်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအတန်း 10-12 အကြားပူဇော်ကြသည်နှင့်ပြီးသားလူဦးရေအပေါ်တစ်ဦးအကြီးသက်ရောက်မှုစေပြီ။
အိမ်ပြန်မတူဘဲ, ယူအေအီး၌ဆုံးမဩဝါဒယနေ့မျှော်လင့်နေတဲ့အကျိုးအမြတ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပြည်ပရှိအဖြစ်ဤနေရာတွင်အသက်ရှင်ရည်ရွယ်နေကြသည်လျှင်သင်လက်လွတ်မသင့်ကြောင်းယူအေအီးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှလေ့လာသင်ယူနှင့်ရဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။
ဆရာ, ဆရာမများအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်အနေအထားအရသိရသည်ခြားနားသည်။ သူတို့ကအစမကြာခဏဤအရပ်မှဘုံကွဲပြားခြားနားမှုချိန်ညှိနေကြသည်။ သို့သော်လမ်းညွှန်ချက်များအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြုံငုံလိုအပ်ချက်များကိုပါ၏
တစ်ဦးအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းထံမှအစောပိုင်းကလေးဘဝပညာရေးသို့မဟုတ် related လက်မှတ်အတွက်တစ်ဦးကဘွဲ့ရဲ့ဘွဲ့
ကြိုတင်လျှောက်လွှာတစ်ခုသူငယ်တန်းသို့မဟုတ်အစောပိုင်းနှစ်များဖျော်ဖြေမှုအတွက်ယခင်သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ2နှစ်ပေါင်း
CELTA လက်မှတ်သို့မဟုတ်သွန်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော / လိုင်စင်
ယခင်သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ2နှစ်ပေါင်း
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြည်မှဥပဒေနှင့်အညီလုံလောက်သောစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများအားအတည်ပြုဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးတည်ကနဦးအရေးပါခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလုပျဗီဇာအခွင့်အရေးနှင့်အခွင့်ထူးသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်းရတဲ့ရန်သင့်လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကဒီမှာအလုပ်ရရန်ဆန္ဒရှိနိုင်ငံခြားသားများများအတွက်အလွန်အရေးပါလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဧည့်သည်သို့မဟုတ်ခရီးသွားဧည့်ဗီဇာပေါ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဝင်စေခြင်းငှါသင်တို့မူကားအလုပ်အကိုင်တွေ့ပြီတစ်ချိန်ကသင်သည်သင်၏ဗီဇာအဆင့်အတန်းကိုလွှဲပြောင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်နိုင်ငံခြားသားများအများစုကြိုတင်သူတို့ရဲ့ဆိုက်ရောက်ရန်ဗီဇာရရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းမူရင်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုစွန့်လွှတ်၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့ယူအေအီးမှာသူတို့ရဲ့ဗီဇာထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားများအချို့အမေရိကန်များ, ဗြိတိန်, ကနေဒါနှင့်တရုတ်တို့ပါဝင်သည်။
ဒါကြောင့်အန္တရာယ်များကြောင့်သင့်လျော်သောအလုပ်ဗီဇာမပါဘဲအလုပ်လုပ်အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဖမ်းမိလျှင်သင်ကပိုင်ဆိုင်မဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သင်သည်သင်၏ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးအပေါ်မှာတိုင်းပြည်စွန့်ခွာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ကစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကံကောင်းတာက, အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာတို့အပေါ်မှာ, သင့်အလုပ်ရှင်သင်တို့အဘို့ဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရေအတွက်ကအဖြစ်သင့်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်သို့သော်အားလုံးကအလုပ်ဗီဇာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အချိန်ယူမဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်း၏လူရဲ့သက်သာချောင်ချိရေးမြှင့်တင်ရန်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှအစိုးရ၏ကတိကဝတ်သင်ကြားမှုအလုပ်အကိုင်များတစ်ခုမိတ်ဆက်ဖို့ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒါကအိမ်ပြန်ပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာကြံနိုင်ငံခြားသားများအဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ယူအေအီးအတွက်ပြည်ပရှိအဖြစ်သင်၏အသက်တာထဲကအကောင်းဆုံးဖြစ်စေလိုလျှင်သင်ဒီထဲကငွေရှာဖို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ မည်သို့ပင်ယူအေအီးသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သင့်အကြောင်းပြချက်များ, သင်ကအတူပါလာသောဆုကြေးငွေမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာအာရေဗျနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏န့်အသတ်အလှအပရှုခင်းကိုခံစားဖို့အားလပ်ရက်များအတွက်သင့်မိသားစုကျော်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှတ်ချက်စေရန်6အရေးကြီးအချက်များ
သင့်ရဲ့ဇာတိနိုင်ငံကနေအဝေးအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၏အတွေးကြောက်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ယူအေအီးကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုပေးထားပါတယ်။ မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကျွမ်းကျင်ပိုင်၏လယ်၏, အာရဗီလူမျိုးထဲတွင်မရေမတွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဤသူသည်သင်တို့အလိုအလျှောက်အလုပ်ရရှိမည်မဆိုလိုပါ; သငျသညျယူအေအီးတစ်ဦးကောင်းမွန်စွာပေးဆောင်အလုပ် secure မှသင့်လျော်သောအလုပ်ရှင်များအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အအင်တာဗျူးအတွက်စိစစ်ရှောက်သွားရန်ရှိသည်။ သို့သော်အချိန်ပြည့်လုပ်သားအဖြစ်တိုင်းပြည်အတွက်ဖြေရှင်းထားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုလစာနှင့်အလုပ်အကိုင်လုံခြုံရေးထက်ပိုကြာပါတယ်။
သငျသညျကော်ပိုရိတ်မူဝါဒများနှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သည်အခြားအရေးပါသည့်ဒြပ်စင်များသင်တို့သည်ငါတို့၏အလုပ်လုပ်နာရီ, အားလပ်ရက်များနှင့်စံလစာနှုန်းကိုအပေါ်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ သငျသညျတိုင်းပြည်ရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အလုပ်-ရှာကြံမစ်ရှင်တွင်ရွှေ့ဖို့စီစဉ်ရှိမရှိ, ကအောက်ပါအချက်များကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။
ယူအေအီးဥပဒခရီးသွားနှင့်စုဆောင်းမှုနှင့်စပ်လျဉ်းအားလုံးကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ဆပ်ဖို့အလုပ်ရှင်များလိုအပ်သည်။ အင်တာဗျူးဖို့ဖိတ်ခေါ်, သင်လေယာဉ်လက်မှတ်၏ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့်နှောင့်အယှက်များနှင့်ယူအေအီးတစ်ခု entry ကိုဗီဇာ processing မရသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအလုပ်ရှင်၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီနှင့်အတူကြောင့်မဆိုအခကြေးငွေသင့်ရဲ့အလားအလာအလုပ်ရှင်အားဖြင့်ပေးဆောင်ခံရဖို့လည်းရှိပါတယ်။ အများစုမှာကျွမ်းကျင်သူများဤအရပ်မှအလုပ်ရှင်များအားဖြင့်အခွင့်ကောင်းယူသည်ဤမူဝါဒ၏သတိမထားမိနေကြသည်။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီအန္တရာယ်ရှိတဲ့တစ်ဦးချင်းစီမှမဆိုနောက်ဆုံးမှာသို့မဟုတ်ကျသွားလုယူရာဥစ္စာကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ဇာတိတိုင်းပြည်အစိုးရကအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်သေချာပါစေ။
သင်ကအလုပ်စာချုပ်ပေါ်မှာရှိသမျှစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများနှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သင့်ပါတယ်။ စာချုပ်ပေါ်မှာရှိသောဒြပ်စင်ဖတ်ပါကအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှင့်အတူကိုက်ညီမှုသေချာစေရန်အချိန်ကိုယူပါ။ မရှင်းလင်းသို့မဟုတ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောဘာမှပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီထိတွေ့ဆက်ဆံ။ သငျသညျအရာခပ်သိမ်းကိုနားလည်, ယူအေအီးမှသွားလာရန်အစီအစဉ်များလုပ်မတိုင်မီဤအမှုကိုပြုသောရပါမည်။
အလုပ်ဖော်ပြချက်နှုန်းအဖြစ်အလုပ်ခေါင်းစဉ်, လစာနှင့်တိကျသောတာဝန်များကိုစစ်ဆေးပါ။ သင့်အနေဖြင့်တာဝန်များနှင့်သူတို့သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုက်ညီရပါမည်၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်သင့်သည်။ သင်အချို့သောတာဝန်များကို၏မသေချာလျှင်, အလုပ်ရှင်သင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ်ဟုမယူဆကြဘူးမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ လက်မှတ်ထိုးခြင်းသင်သဘောတူနှင့်အလုပ်အကိုင်စာချုပ်ထဲမှာအရာအားလုံးနိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုသည်။
မူလအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှင့်အတူအလုပ်သမားစာချုပ်စစ်ဆေးကူး, သူတို့ tally သငျ့သညျ။
အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပြည့်စုံသောအလုပ်သမားစာချုပ်လက်ခံရရှိပြီးနောက်, စာရွက်စာတမ်းများအတော်ကြာမိတ္တူပါစေ။ သင့်ရဲ့လက်မှတ်များနှင့်အာမခံအပါအဝင်အခြားသက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများလည်းမိတ္တူအတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအရှုံးသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုသည်။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သောအားလုံးစာရွက်စာတမ်းများလည်းအများအပြားမိတ္တူအတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျအလုပျရတောင်မှပြီးနောက်ဘေးကင်းလုံခြုံစာရွက်စာတမ်းများကိုစောင့်ရှောက်။ သင်သိဘယ်တော့မှ!
သငျသညျယူအေအီးရောက်ရှိသောအခါ, တိုင်းပြည်၌သင်တို့ကို process နှငျ့သငျအခြေချနေထိုင်ကြသည်သေချာစေရန်အလုပ်ရှင်၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်နှင့်အတူမည်သည့်အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားဖြင့်ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သင်အခကြေးငွေအလုပ်ရှင်အားဖြင့်ပေးဆောင်ရပါမည်သက်ဆိုင်သော, ဆေးစစ်ဘို့သွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်လည်းအလုပ်ရှင်ရဲ့တာဝန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျခရီးမရောက်မီသံသယ၌, စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီသို့မဟုတ်အလုပ်ရှင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာယူအေအီးကော်ပိုရိတ်ဥပဒနှုန်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ဟိုတယ်တွင်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းရှိမရှိမဆိုငွေပေးချေဘို့, လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုသိုထားရပါမည်။ ယူအေအီးဥပဒေများကိုအထူးသနှင့်လိမ်လည်မှုနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဆန့်ကျင်တင်းကျပ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်သူကသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်ဖို့တာဝန်နှင့်တာဝန်ခံသက်သေပြနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မယ်။ အစီအစဉ်ရှာကြံအလုပ်အပြင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးတာဝန်ခံဘို့အကောင်းတစ်အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်များကို mark ရန်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုစောင့်ရှောက်။
ဒါ့အပြင်ဘေးကင်းလုံခြုံသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်းများကိုစောင့်ရှောက်။ သင်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်စဉ်းစား, သူတို့ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်သည့်အခါကိုသိရတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဆိုက်ရောက်ပေါ်တွင်သင်၏အလုပ်ရှင်နှင့်အခြားစည်းမျဉ်းအဖွဲ့အစည်းများသည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, ဗီဇာနှင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်တောင်းခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့အထောက်အထားနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရအတည်ပြုဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်အားဖြင့်တစ်ဦးနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားသည့်အခါအဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများလည်းလိုအပ်သည်။
ယူအေအီးအတွက်ဆိုက်ရောက်ပေါ်၌အလုပ်ရှင်အားလုံးစာရွက်စာတမ်းအပြောင်းအလဲနဲ့ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ တစ်ပါတ်အတွင်းမှာပဲအလုပ်ရှင်သည်သင်တစ်ဦးပြည့်စုံအလုပ်စာချုပ်တင်ပြသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါစာချုပ်အတိအကျမူရင်းကမ်းလှမ်းမှုကိုကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်သင့်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ရှိတစ်ဦးအမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်နှင့်အလုပ်ရှင်သည်အခြားနေမကောင်းစိတ်ရင်းရှိပါတယ်မပြုစေခြင်းငှါ။ သင်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမဆိုချိုးဖောက်မှုများသို့မဟုတ်မရိုးသားမှုခံစားရလျှင်အလုပ်ရှင်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်နောက်ထပ်တစ်ပတ်စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့။ အမြန်လုပ်ရပ်များနှင့်အကူအညီများအတွက်အလုပ်သမားရေးရာရုံးဖို့ကိစ္စသတင်းပို့ပါ။ သူတို့ကအလုပ်စာချုပ်အပေါ်သဘောတူညီခဲ့ရက်စွဲနှင့်ငွေပမာဏနှုန်းအဖြစ်အပြည့်အဝတွင်သို့မဟုတ်အချိန်၌သင်တို့၏လုပ်အားခပေးချေရန်ပျက်ကွက်လျှင်ဒါ့အပြင်သင်အလုပ်ရှင်သတင်းပို့သင့်ပါတယ်။
သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်အပေါ်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, နာမည်ကြီးအာရေဗျသဲကန္တာရကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့မတိုင်မီစဉ်းစားရန်တွေအများကြီးရှိသေး၏။ ဗြိတိန်, အမေရိကန်, ကနေဒါနှင့် waivered ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနှင့်အတူတခြားနိုင်ငံတွေကနေလျှင်, သင်တစ်ဦးအလုပ်ရရန်အကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရပ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာကနေအတော်များများဘွဲ့ရအိမ်ပြန်အခက်များရှိသည်သောနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများ, နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရွေးပါ။ ဤသည်ကိုသူတို့အလုပ်အကိုင်များနှင့်ရုံးခန်းများလုံခြုံရန်ရှိသည်ကိုအကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအသားတင်ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့အခွန်လွတ်ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့်အကျိုးခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကျော်ကြားသောအာရေဗျနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကဒီမှာနေထိုင်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုခရီးသွားဧည့်များနှင့်ဧည့်သည်များအားပူဇော်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်သဲကန္တာရများနှင့်မတူထူးခြားပတ်ဝန်းကျင် Ultra-ခေတ်သစ်သဘောထားတွေနဲ့အစာရှောင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစက်မှုမြို့ပြစင်တာတစ်ခုနောက်ခံပြုမူပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားတစ်ဦးမြင့်မားသောဝယ်လိုအားလည်းမရှိကိုဆိုလိုသည်။ ဒူဘိုင်း, ဥပမာအားဖြင့်ဒေသ၏၎င်းတို့၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ငံခြားအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့များစွာသောအခွင့်အလမ်းများကိုပေးထားပါတယ်။ ဒါကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်-အကျိုးကျေးဇူးများကိုစာချုပ်သင်အလိုရှိသောဝင်ငွေရနေချိန်တွင်အသိပညာနှင့်အရင်းအမြစ်များမှအကျိုးမှတိုင်းပြည်ကူညီပေးသည်။
ယူအေအီးသငျသညျအစဉျအမွဲကိုတွေ့လိမ့်မည်အရှိဆုံးလစ်ဘရယ်နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းလည်းသင်ယူဖို့အများကြီးရှိသေး၏။ သငျသညျကိုသူတို့ကဒီမှာကအရမ်းအလေးအနက်ထားကြသည်ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာရေးတန်ဖိုးများကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘာသာရေးနှင့်ခြုံငုံယဉ်ကျေးမှုအရတိုင်းရက်ကြာအသက်တာ၏အဓိပ်ပါယျသို့ရောယှက်နေကြသည်။ လူအရဲ့အမူအကျင့်များနှင့်အမှုအရာလုပ်နေတာ၏ခြုံငုံလမ်းသင်ယူခြင်းသင်အလွယ်တကူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးပါမည်။
အလုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း; အများဆုံးပြည်တော်ပြန်စပွန်ဆာအောက်မှာစာချုပ်အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အခွန်လွတ်ဝင်ငွေရရှိမှုတွန်းလှန်ကြသည်။ တစ်ဦး gratuity ဝန်ဆောင်မှုပေးချေမှုအဆိုပါကန်ထရိုက်များ၏အဆုံးအပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ယူအေအီးမှာအလုပျလုပျဖို့ဘယ်မှာအကြောင်းကိုတွေးတောနေတယ်ဆိုရင်, အချို့ကိုသင်နည်းနည်းသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ ယူအေအီးအတွက်အကြီးမားဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွမ်းကျင်လုပ်သားများဝန်ဆွဲဆောင်ကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားပါ။ သဘာဝ petrocarbon အရင်းအမြစ်များကိုအစဉ်အဆက်ကိုတှေ့မွငျအကြီးမြတ်ဆုံးတိုးတက်မှုနှုန်းလိုက်လျောဖို့အမျိုးသားစီးပွားရေး enabled ပါပြီ။ ဤ တိုးတက်မှုနှုန်းကမ္ဘာတဝှမ်းအရှိဆုံးလူများအတွက်အဓိကခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာသို့ဒေသအသွင်ပြောင်းထားသည်။ ဒါဟာအစအနာဂတျအတှကျတစ်ဦးအကျိုးအမြတ်နှင့်လူကြိုက်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရာအရပ်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်း။ ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲများ၏နိဒါန်းကိုလည်းကမ္ဘာလုံး၏ကျန်ဖို့ဒေသ၏အရေးပါမှုကိုပြသသည်။
ယနေ့ဒီပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏မဟာဗျူဟာကုန်သွယ်ရေးအချက်အချာဖြစ်ပြီးသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်အတွက်ကမ္ဘာကဦးဆောင်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဤနေရာတွင်စားသုံးသည့်အစားအစာ၏အများကြီးတင်သွင်းသည်။ ဒီအစာရှောင်ခြင်းအစာအာဟာရကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကွာအဝေး package ကုမ္ပဏီများအဘို့ကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆိုလိုသည်။
နောက်ဆုံးပေါ်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာအထူးသဖြင့် 2008 ၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားစီးပွားရေးကျဆင်းမှုအပြီးအလွန်ကြီးစွာသောတိုးတက်မှုပြသထားတယ်။ ဒါဟာမူလကရေနံစျေးနှုန်းများနှင့်အိမ်ခြံမြေအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည့်စျေးကွက်၏အမျိုးမျိုးမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပွောငျးလဲနေသောရေနံစျေးနှုန်းများအပြီးတွင်-တက်ပြိုလဲဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ secure အခြားကဏ္ဍများသို့မျိုးစုံခေါ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဖြစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ယူအေအီးအတွက်အသစ်သောလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒူဘိုင်းဇိမ်ခံအသုံးစရိတ်များအတွက်လူသိများသည်နှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မည်သည့်ဆိုင်းနေတဲ့ကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်ယူအေအီးအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ စီးပွားရေးအမျိုးမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဒုက္ခထဲကလုံခြုံလမ်းဖြစ်လာသည်။ အပြင်ရိုးရာရေနံနှင့်ရေနံဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းကနေ, သင်လည်းငါးဖမ်း, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ, လူမီနီယံ, စီးပွားဖြစ်သင်္ဘောပြုပြင်, လက်မှုပညာ, ဘိလပ်မြေနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာကုမ္ပဏီလုပ်ကိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းသင့်ရဲ့အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအသုံးချမှကြီးမြတ်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးထားပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီဘွဲ့ရသို့မဟုတ်ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏ဘာပဲအဆင့်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ယူအေအီးအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေမှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်း, ဥပမာ, များစွာသောနိုင်ငံခြားသားတွေသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရည်မှန်းချက်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတက်ယူခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာနိုင်ငံခြားသားတွေတစ်လုပ်ရတဲ့တာခြင်းမရှိဘဲကဒီမှာနှင့်ယူအေအီး၏ကျန်လုပ်ကိုင်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဆိုလိုသည်။ ပြန်နေရာဖြစ်သည်သကဲ့သို့လျှောက်ထားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအများကြီး၏ရှည်လျားသောစာရင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြဘူး, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဝယ်လိုအားအပေါ်အကျိုးအမြတ်အများဆုံးအလုပ်အကိုင်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတွေထဲမှာပါ၏ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး, algorithm ကိုဒီဇိုင်း, ဒေတာသတ္တုတူးဖော်ရေး, အများပြည်သူမူဝါဒ, ကို web ဗိသုကာ, SEO ဆိုသည်မှာ / SEM စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် UI ကိုဒီဇိုင်းများ
သင်ယူအေအီးအလုပ်လုပ်ချင်လျှင်၎င်း, သငျသညျထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းရဲ့အလုပ်ဈေးကွက်သို့ခုန်ဒေသတွင်းနှင့်ပူးတှဲပါဘောဂဗေဒ၏အသိပညာလိုအပ်သည်။ ပါဝင်သည်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စရပ်များကိုများထဲတွင်; ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ, စပွန်ဆာ, အဘယ်မှာအင်တာဗျူးအကြံပေးချက်များသည်ကိုကြည့်ရှုရန်။ ဒီနေရာတွင်သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏အိပ်မက်အလုပ်ရှာတွေ့မတိုင်မီရရှိရန်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်ကြ၏။
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့အဆင်သင့်ရယူခြင်းသင့်လျော်သောစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများအားအတည်ပြုဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဦးတည်ကနဦးအရေးပါခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလုပျဗီဇာအခွင့်အရေးနှင့်အခွင့်ထူးသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်းရတဲ့ရန်သင့်လက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကဒီမှာအလုပ်ရရန်ဆန္ဒရှိနိုင်ငံခြားသားများများအတွက်အလွန်အရေးပါလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဧည့်သည်သို့မဟုတ်ခရီးသွားဧည့်ဗီဇာပေါ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဝင်စေခြင်းငှါသင်တို့မူကားအလုပ်အကိုင်တွေ့ပြီတစ်ချိန်ကသင်သည်သင်၏ဗီဇာအဆင့်အတန်းကိုလွှဲပြောင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်နိုင်ငံခြားသားများအများစုကြိုတင်သူတို့ရဲ့ဆိုက်ရောက်ရန်ဗီဇာရရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းမူရင်းသင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုစွန့်လွှတ်၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ပါဝင်သည် 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့ယူအေအီးမှာသူတို့ရဲ့ဗီဇာထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နိုင်ငံသားများ၏ဥပမာအချို့;
ဆွစ်ဇာလန်, ဆွီဒင်, စပိန်, ဆလိုဗေးနီး, Slovakia ရိုမေးနီးယား, ပေါ်တူဂီ, ပိုလန်, နော်ဝေး, မော်လ်တာ, လူဇင်ဘတ်, လစ်သူ, လီချင်စတိန်း, လတ်ဗီးယား, အီတလီ, အိုက်စလန်, ဟန်ဂေရီ, ဟော်လန်, ဂရိ, ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, ဖင်လန်, စတိုးနီးယား, ဒိန်းမတ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ , ဆိုက်ပရပ်စ်, ခရိုအေးရှား, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်သြစတြီးယား။ အခြားသူများက 30 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဗီဇာမလိုအပ်ပါဘူး။ သူတို့ကပါဝင်သည်; ကနေဒါ, တရုတ်, သြစတြေးလျ, ဂျပန်, ရုရှား, အိုငျးရစျ, ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်များ။
သင့်လျော်သောအလုပ်ဗီဇာမပါဘဲအလုပ်လုပ်နေအန္တရာယ်များသည်။ ဖမ်းမိလျှင်သင်ကပိုင်ဆိုင်မဒုက္ခဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သင်သည်သင်၏ဗီဇာသက်တမ်းကုန်ဆုံးအပေါ်မှာတိုင်းပြည်စွန့်ခွာရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ကစိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကံကောင်းတာက, အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာတို့အပေါ်မှာ, သင့်အလုပ်ရှင်သင်တို့အဘို့ဗီဇာဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အရေအတွက်ကအဖြစ်သင့်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်သို့သော်အားလုံးကအလုပ်ဗီဇာများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အချိန်ယူမဟုတ်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အလုပ်ဗီဇာများအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းသင်သည်သင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများတင်ပြရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားကျန်းမာရေးစာရွက်စာတမ်းများနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ, ဓါတ်ပုံများ, အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစာတစ်စောင်နှင့်ဗီဇာလျှောက်လွှာနှင့်အတူသွားရရမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဦးစီးဌာနသည်သင်၏အလုပ်ဗီဇာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်ရှေ့မှာဤတင်ပြချက်များမှအပြည့်အဝလိုက်နာမှုလိုအပ်သည်။ သငျသညျကနျြးမာရေးနဲ့ဆေးပညာန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနအနေဖြင့်တစ်ဦးလိုအပ်ချက်အဖြစ်သွေးစစ်ဆေးမှုယူရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုထိုကဲ့သို့သော HIV / AIDS, အသည်းရောင်, C နှင့်တီဘီရောဂါအဖြစ်ရောဂါများထွက်မအုပ်စိုးသငျ့သညျ။ ယခုအချိန်တွင်, အနာရောဂါမရှိနိုင်ငံခြားသားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်ကသာသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသားအပေါင်းတို့အတွက်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများအတွက်မသင်မနေရဖြစ်သောကျန်းမာရေးကဒ်မှီနိုငျသောစမ်းသပ်မှုများဖြတ်သန်းပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအလုပ်သမားကဒ်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓါတ်ပုံ, အလုပ်အကိုင်စာချုပ်, entry ကိုဗီဇာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများနှင့်အလုပ်ရှင်များ '' အသေးစိတ်ကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအသေးစိတျအလုပျသမားဝန်ကြီးဌာနများကအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းရဲ့နေထိုင်ရာအထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသင်၏နေထိုင်ဗီဇာခံယူသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကလျှောက်လွှာဖြည့်စွက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၌သင်တို့၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်သည်။ သင်တစ်ဦးပုံစံကိုဖြည့်ပါနှင့် (ကျန်းမာရေးလက်မှတ်, entry ကိုပါမစ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓာတ်ပုံများ, အလုပ်သမားကဒ်နှင့်သင့်အလုပ်သမားကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတည်ပြုတစ်ဦးလက်ခံရရှိတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်) သင့်စာရွက်စာတမ်းများပေးပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုများ၏ယျြဝနျးစိတ်ကူးရဖို့, အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီနေရာတွင်ကုမ္ပဏီများနှင့်ထိတွေ့ပါလိမ့်မည် အသေးစိတ်အတွက်ကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်း။ ဝယ်လိုအားနှင့်လွယ်ကူသော-လျှောက်ထားခွင့်အလမ်းများကိုအပေါ်အလုပ်တွေ့ဆုံရန်အသုံးအများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုဒ်များကိုရှာပါ။ အွန်လိုင်းဗားရှင်းကိုသင်ရုံးများသို့ရွေ့လျားမည်မဟုတ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကထိုကဲ့သို့ပိုက်ဆံနှင့်အချိန်အဖြစ်အနည်းဆုံးအရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီမှာဒူဘိုင်းအတွက်အဆက်အသွယ်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုကိုရှာဖွေအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေဆုံးနှင့်ထိရောက်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီများသည်သစ္စာစောင့်သိကြသည်နှင့်သူတို့၏ကောင်းမွန်စွာထူထောင်က်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်သူတို့အများအပြားနိုင်ငံခြားသားများစုဆောင်း။
ဒူဘိုင်းအလုပ်တစ်ခုရရန်အကောင်းဆုံးနေရာများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်လိုအပ်အားထုတ်မှုများနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့သတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပါလိမ့်မည်ရရ။ တဖန်သင်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်, သင်အလွန်အမြော်အမြင်ရှိရှိရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်အမြဲသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုသုံးနိုင်သည်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကာလအချိန်ကိုဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သငျသညျပြည်ပမှာရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေလျှင် သငျသညျကျိန်းသေအသက်ရှင်ဖို့နေရာတစ်နေရာအဖြစ်ဒူဘိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုယ်စားလှယ်ပေါ်တွင်သင်၏ CV ကိုစော်ဘွားအတွက်အလုပ်ရရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်မှတ်ပုံတင်ရန်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေအပေါ်တစ်ဦး 100% အာမခံချက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ အတော်ကြာကဏ္ဍများတွင်ကူညီခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်း။ မှ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ ဦးစီးဌာန။ အထိ ယူအေအီးအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေသည်။ အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းမှ, ပါကစ္စတန်ကနေအဘူဒါဘီရန်။ ကျနော်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့နေရာကဒီမှာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ခံခဲ့ဘူးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာမတှေ့ဘူး။
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းယောဘ ?. အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်သတိပြုပါအဖြစ်အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ရိုးရိုး အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင်နဲ့စတင် upload အသစ်အလုပ်အကိုင် ဒူဘိုင်း!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ယူအေအီးအတွက်အမြန်ဆုံးဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ!
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များ, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရနိုင်သည်။